ဇဝတ်သားရှေ့နေ - ရှေ့နေများအတွက်ဘရာဇီးနှင့်ပေါ်တူဂီ! အားလုံးရှေ့နေများကိုအွန်လိုင်း။
* သင့်ရဲ့ e-mail,
အမိန့်၏ရှေ့နေ၏ဘရာဇီးကဘရာဇီးဘားအသင်းတည်ထောင်ရန်အတွက် ၁၉၃၀။ ဒါကြောင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ရှေ့နေနှင့်တာဝန်ရှိ၏စည်းမျဉ်းများအတွက်ဥပဒေအလုပ်အကိုင်အတွက်နိုင်ငံ။ ၎ အမျိုးသားကားေတြသာ í၊ဖက်ဒရယ်ခရိုင်။ အ ၁၊၀၆၅၊၃၀၄ ရှေ့နေ(၂၀၁၈)။ ၎င်း၏ဇစ်မြစ်ကိုအစောပိုင်းအတွေ့နေကြတယ်အပေါ်တစ်ဦးပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းတည်ထောင် ၁၈၄၃။ ဘွဲ့ရအတွက်ဥပဒေတက္ကသိုလ်မှရန်ဆန္ဒရှိသောသူ၏ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ရှေ့တော်၌ဖောက်သည်တရားရုံး၏ဥပဒေမဖြစ်မနေမှတ်ပုံတင်ရန်အမိန့်မှာ၏ရှေ့နေဇီး၏။ သူတို့သာနေသောကပ္ထားမှတ်ပုံတင်နိုင်သည်များကိုဥပဒေကြောင်းအရတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးပေါ်လာမီကတရားရုံး။ ဒါကြောင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလွတ်လပ်သောအစိုးရ၊ဒါပေမယ့်အချို့အများပြည်သူအလုပ်ပိုင်ခွင့်၊ပါဝင်သောကမ်းအရေးယူကျော်၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်များ။ ဘရာဇီးအတွက်၊ဘားစာမေးပွဲဖြစ်ပေါ်နိုင်ငံအတွက်မတ်လ၊ဇွန်လနှင့်ဒီဇင်ဘာလ။ ဤရန္မေစုစည်းပြီးစနစ်တကျစီစဉ်အားဖြင့်အမိန့်၏ရှေ့နေဇီး၏။ ငါးနှစ်ကြာပြီးနောက်တွင်ဥပဒေကျောင်းဘွဲ့၏ဥပဒေများယူအကြောင်းပါဝင်သည်နှစ်ခုအအဆင့်:အကြိမ်များစွာရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်ပြီးရေးသားစမ်းသပ်မှုမရှိဘဲထပ်မံလိုအပ်ချက်များကို။ အစိုးရ၏ဘရာဇီးအစုံကန့်သတ်အပေါ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလေ့အကျင့်များ၏ဥပဒေစိတ်ဓာတ်ကိုဆောင်၏ လိုအပ်ချက်များနှင့်အရည်အချင်းသူတို့လိုအပ်ရာတွေထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်၊အပြင်ကျောင်းဆင်းပွဲတရားဝင်တင်သွင်းလျှောက်ထားအတွက်သည္။ ဘားစာမေးပွဲဖြစ်သည်နှင့်အညီဥပဒေ ။ ၈၉၀၆၏ဇူလိုင္လ ၄၊၁၉၉၄:အတွင်း၎င်း၏အင်ဖော်ပြခွင့်ပြုခြင်းအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်သာမန် တောင်းဆိုသည်ကားဆန္ဒကိုမှီအောင်လိုက်မှဥပဒေရေးရာအလုပ်အကိုင်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်တဲ့ဒီဂရီဘွဲ့များ၏ဥပဒေများနှင့်ဖို့အတွက်အတည်ပြုအဘယ်သူ၏ပြင်ဆင်မှုနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ပြုခြင်းအားဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အတန်း။ မြင်တွေ့အဖြစ်၊အဘယ်သူမျှမ ရှေ့တော်၌အ။ အစိုးရကိုယ်တိုင်ကအတွက်ထောက်ပံ့။ မရှိမည်သည့်တရားမဝင်ကတည်းကပညတ်၏ဥပဒေလိုအပ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၊သောအငြင်းအခုံစာမေးပွဲတရားဝင်ဖြစ်ပါသည်၊ဒါပေမယ့်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အသြင္းအဆင့်ဟာသိပ်ကိုမြင့်၏ဥပဒေရေးရာအသိပညာ၊အလားတူအများပြည်သူအတွက်စမ်းသပ်မှုကိုသို့မဟုတ်များအတွက်ရှေ့နေလုံးဝ။ အဆိုပါစာမေးပွဲခဲ့ရသည်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်လက်တွေ့ကျအလတ်အဆင့်၊အချို့သောပိုပြီးခက်ခဲသည်၊အခြားသူများကိုအလွန်အမင်းရိုးရှင်း၊ အပေါ်လုံးဝအမြားအဘော်နှင့်အဘယ်သူ၏အသိပညာလိုအပ်နှင့်အမဖြစ်သူမည်သူမဆိုဖို့ရည်ရွယ်ထားလေ့ကျင့်ခန်းဥပဒေအလုပ်အကိုင်။ နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဘို့၊အခြားပြည်တွင်းဥပဒေနိုင်ငံများ၊ထိုကဲ့သို့သောပြင်သစ်အဖြစ်နှင့်အီတလီ၊အဘားစာမေးပွဲလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပိုပြီးတောင်းဆိုမှုများထက်သာဘရာဇီး။ ပြင်သစ်အခြေအနေအကြောင်းအဆုံးသတ်ပြီးနောက်ဥပဒေကျောင်းသည်တက်ရောက်ရန်တစ်မသင်မသင်တန်းတနှစ်နှင့်အမူအဖြစ်မနှစ်သတ္မွတ္အ၊စီးပြီးနောက်ထိုကဲ့သို့သောအကျပ်ပြုသော။ စုစုပေါင်းရှစ်နှစ်တာလေ့လာမှု၏။ အီတလီအခြေအနေဘွဲ့ရပြီးနောက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလျှောက်ထားစေသင်မနေရလေ့ကျင့်သင်တန်း၏ဥပဒေရေးရာအလေ့အကျင့်၏နှစ်နှစ်။ နောက် အားဖြင့်သက်သေပြသကဲ့သို့၊ထိုအလေ့အကျင့်၌ပါဝင် နှင့်ငှ၏နိဋ်၊အလျှောက်ထားစေခြင်းငှါမှတင်သွင်းသည့်စာမေးပွဲ။ အဆိုပါစာမေးပွဲပါဝင်ပါသည်ရေးသားပါးစပ်စမ်းသပ်မှု။ ပြီးတာနဲ့အတည်ပြု၊အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းနိုင်ယူပြဋ္ဌာန်းပြီးတို့အတွက်တက်လက်မှတ်ထိုးနိုင်ရန်။ သို့သော်၊အစြမ္းမစုစုပေါင်းအမှုကြောင့်၊အဆိုပါအီတလီတ္တဖို့လိုတကျိပ်နှစ် အရုံးေရးအတြက္ဒီႏုိင္ငံမီ ရစ္ကင(တရားရုံး၏)နှင့်အခြားမြင့်မားသောတရားရုံး(ဥပေဒနှစ်ဆယ်ခုနစ် ၁၉၉၇)။
ဗီဇာလိုအပ်ချက်များကိုများအတွက်ဘရာဇီးနိုင်ငံသားများအုပ်ချုပ်ရေးင္ခြကန့်သတ်ခြင်းအားဖြင့်အစိုးရ၏ပြည်ထောင်စုအပေါ်ထားရှိနိုင်ငံသားဇီး၏။ ၏အဖြစ်နှစ်ဆယ်-ခြောက်မတ်လ ၂၀၁၉ ဘရာဇီးနိုင်ငံသားဖူးဇာ-အခမဲ့သို့မဟုတ်ဗီဇာအပေါ်ရောက်ရှိလာမှဝင်ရောက်ခွ ၁၇၁ နိုင်ငံများနှင့်နယ်မြေအဆင့်၊အဆိုပါဘရာဇီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၁၇၏စည်းကမ်းချက်များ၌ခရီးသွား လွတ်လပ်ခွင့်၊အဆိုအည္အက်ႌကူးလက်မှတ်အညွှန်းကိန်း။ အ အဖွဲ့ဝင်ပြည်ထောင်စု၏အာဂျင်တီးနား၊ဘရာဇီး၊ပါရာဂွေး၊ဥရုဂွေးနှင့်အတူအများဆုံးအခြားအမေရိကန်တောင်ပိုင်းနိုင်ငံများ(အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း)ပင်လိုအပ်သည်ဘရာဇီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမျိုးသားသို့မဟုတ်ပြည်နယ်-ထုတ္ျပန္ခ်က္ဘရာဇီးအထောက်အထားကဒ်အဘို့လောက်ပေ။အားလုံး အဖွဲ့ဝင်ပြည်ထောင်စု(ချွင်းချက်နှင့်အတူအညွှန်းကိန်းနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ)။ သို့သျောလညျး၊အထောက်အထားကဒ်ရမည်၌ကောင်းသောအခြေအနေ၊မဖြစ်ရပါမည်သက်တမ်းကုန်ကြပြီ၊နှင့်အကိုင်ရမည်ဟုမှတ်မိမှာပါ။ လွတ်လပ်အတွင်း ရန်န့်အသတ်လက်လှမ်းမဆိုအပြည့်အဝအဖွဲ့ဝင်များ(အာဂျင်တီးနား၊ပါရာဂွေး၊ဥရုဂွေး)နှင့်ဆက်စပ်အဖွဲ့ဝင်များ(ဘိုလီးဗီးယား၊ချီလီ၊ပီရူး၊ကိုလံဘီယာ၊အီကွေဒေါ)နှင့်အတူကိုနေအိမ်နှင့်အလုပ်နှင့်အတူ၊အဘယ်သူမျှမလိုအပ်ချက်ထက်အခြားနိုင်ငံသား။ နိုင်ငံသားများ၏ဤကိုးနိုင်ငံ(ဘရာဇီး)ေလွ်ာက္ထားအသနားတော်မူ၏'ယာယီနေအိမ်သို့'အထိနှစ်နှစ်တွင်နောက်ထပ်နိုင်ငံတို့ဖြစ်ကြသည်။ ထိုအခါ၊သူတို့အတွက်လျှောက်ထား'မြဲတမ်းနေထိုင်'အခေါ်အဝေါ်များ ျယီနေအိမ်သို့'ကုန်။ ဗီဇာများအတွက်ကမ္ဘောဒီးယား၊ျမန္မာ၊ရဝမ်ဒါ၊ဆာမိုအာ၊အပ်ိဳ၊သီရိလင်္ကာနှင့်ကြက်ဆင်ရယူနိုင်သောအွန်လိုင်း။ မရှိခြင်းအတွက်တိကျတဲ့စ္ႏသဘောတူညီချက်များ၊နိုင်ငံအလုပ်အိႏဖြစ်သည်သက်တမ်းမှာအနည်းဆုံးခြောက်လခန့်ပိုပြီးလပေါ်ရောက်ရှိင္သည္ဂန္နစ္စတန္၊အယ္လ္ဂ်ီးရီးယား၊ရစ်၊ဘာရိန္း၊ခြောက်ဘူတန်၊ဆာမိုအာ၊ဗြိတိသျှဗာဂျင်းကျွန်းများ၊ဘရူနိုင်း၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ကင်မရွန်း၊ဆီနီဂေါ၊ကေမန်ကျွန်းစု၊ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ၊ချဒ်၊ဘူတန်နိုင်ငံ၊တာဂျစ်ကစ္စတန်၊ဟယ်၊အရှိန်၊အီကွေဒေါ၊အဲဂုတ္တု၊မကွေတာဂီနီ၊ဖီဂ်ီ၊ဂါဘြန္၊ဂီနီကောင်းမွန်၊ဂါဘွန်၊ေဟတီ၊အင်ဒိုနီးရှား၊အီရန်၊အီရတ်၊ဣ၊ ခြောက်ဂ်ာ္ဒန္၊ကင္ညာ၊ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ၊ကူဝိတ်၊အို၊ဒတ်ဂါစကာ၊မေလးရွား၊ေမာ္လ္ဒိုက္၊မာရှယ်ကျွန်းစု၊မြန္ဂုိးလီးယား၊ျမန္မာ၊ဘီးယား၊နီပေါ၊ဂွာ၊နိုင်ဂျီးရီးယား၊အိုမန္၊တႏိုင္ငံ၊ပါပူအာနယူးဂီနီ၊ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ရဝမ်ဒါ၊ဆာမိုအာ၊ဆော်ဒီအာရေဗျ၊စင်ကာပူနိုင်ငံ၊ဆော်လမွန်ကျွန်းစု၊ဘူ၊သီရိလင်္ကာ၊ဆူဒန်နိုင်ငံ၊အင်ဂိုလာနိုင်ငံ၊တန်ဇန်းနီးယား၊ထိုင်းနိုင်ငံတွင်၊အျမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွလာျ၊၊တုံ၊၊ယူဂန်ဒါ၊အာရပ် စော်ဘွား၊ဗဲ၊ဗင်နီဇွဲလား၊ဗီယက်နမ်။ ခြောက်နိုင်ငံတောင်းကူးလက်မှတ်နှင့်အတူတစ်ဦး၏သက်တမ်းမှာအနည်းဆုံးသုံးလလွန်မြောက်၏ရည်ရွယ်ထြက္ခြာင္သည္ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံများအတွင်း(နိုင်ငံလန်နှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း)အိုက်၊လစ်၊နော်ဝေ၊ဆွစ်ဇာလန်ကို(လူအပေါင်းတို့သည်အတူတစ်ဦးခြွင်းချက်အဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူယ္ငယ္န္နှင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသား)။ ဘိုင္ဂ်န္၊ဂျော်ဒန်နိုင်ငံ၊ဘာသာျပန္ခ်က္၊နာအူရူ၊မော်လ်ဒိုဗာ၊နယူးဇီလန်လည်းလိုအပ်သည်သုံးလသက်တမ်းကျော်လွန်၏နေ့စွဲလုလင်ရဲ့ရည်ရွယ်ထွက်ခွာ။ ငံလိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းအနည်းဆုံးသုံးလသက္တမ္းဆိုက်ရောက်အပေါ်သို့င္သည္အယ္လ္ေ၊ဟွန်ဒူး၊ေျမာက္၊ပနားမား၊ကာတာနိုင်ငံ၊အပ်ိဳ။ နိုင်ငံကိုလိုအပ်ကြောင်းအကူးလက်မှတ်သက်တမ်းအနည်းဆုံးတစ်လထက်ကျော်လွန်၏ရည်ရွယ်ထြက္ခြာင္သည္ ၊ေဟာင္ေကာင္၊ဘအုိ၊တောင်အာဖရိက။ အခြားနိုင်ငံများလိုအပ်ဖြစ်စေတစ်ဦးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းအပေါ်ဆိုက်ရောက်သို့မဟုတ်အကူးလက်မှတ်သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးကာလ၏ရည်ရွယ်။ အချို့နိုင်ငံများရှိစ္ႏသဘောတူညီ နှင့်အခြားနိုင်ငံများမှအတိုကောက်ကာလ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သက်တမ်းအတွက်လိုအပ်သောအသီးအသီးအခြား၏၆၆ သို့မဟုတ်ပင်လက်ခံကူးလက်မှတ်ရှိသည်လက္မွတ္မ်ား(ဒါပေမယ့်မပြီးဖျက်သိမ်း)။ ခုနစ်နိုင်ငံအများအပြားလိုအပ်တဲ့အနိမ့်ဆုံးအရေအတွက်ကွက်လပ်စာမျက်နှာများတွင်အတွက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပေးအပ်ခံရခြင်း၊ယေဘုယျအားဖြင့်တယောက်သို့မဟုတ်နှစ်ခုစာမျက်နှာများတွင်။ ခုနစ်ထောက်ခံချက်၊အရာမကြာခဏပေါ်လာပြီးနောက်အဇာစာမျက်နှာများ၊မရေတွက်အဖြစ်။ အပြားအာဖရိကနိုင်ငံများအပါအဝင်၊အန္ဂိုလာ၊ဘီနင္၊၊ကင်မရွန်း၊ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ၊ချဒ်၊ဘာသာေရး၊နိုင်ငံကစ္စတန်၊ဟယ်၊အီကွေတာဂီနီနိုင်ငံ၊ဂါဘြန္၊ဂါနာ၊ဂီနီနိုင်ငံ၊လိုက်ဘေးရီးယား၊မာလီ၊ဂျက်၊ကြံ့၊ရဝမ်ဒါ၊ဆာမိုအာ၊အပ်ိဳ၊မာလာဝီ၊ယူဂန်ဒါ၊ဇမ်ဘီယာ၊လိုအပ်သည်အားလုံးအဝင်ခရီးသည်အများတစ်ဦးကလက်ရှိနိုင်ငံတကာလက်မှတ်ကိုကာကွယ်ဆေး၏။ အချို့သောအခြားနိုင်ငံများကာကွယ်ဆေးထိုးသာလျှင်ခရီးသည်များအနေဖြင့်လာမယ့်တစ်ဦးကူးစက်ခံရတဲ့ဒေသသို့မဟုတ်သူမသွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးတဦးတည်းမကြာသေးမီက။ ခုနစ်ဝိတ်၊ခုနစ်နုန်၊ခုနစ်၊ခုနစ်ဆာ္ဒီ အာေ၊ခုနစ်ဆူဒန်၊ခုနစ်ဆီးရီးယား၊ခုနစ်နှင့် ၇ ခွင့်ပြုမထားပါနဲ့မှအတူလူကူးလက်မှတ်တံဆိပ်ခေါင်းကနေအစ္စရေးဒါမှမဟုတ်အဘယ်သူ၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များအဖြစ်အသုံးပြုသို့မဟုတ်အသုံးမပြုအစ္စဇာ၊သို့မဟုတ်အရပ်သက်သေအထောက်အထားများ၏ယခင်ခရီးသွားလာအစၥေထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်င္ခြသို့မဟုတ်ထွက်ပေါက်တံဆိပ်ခေါင်းကနေအိမ္နီးခ်င္းနယ်စပ်တွင်ပို့စ်များအကူးကဲ့သို့သောနိုင်ငံများသည်ယော်ဒန်မြစ်နှင့်အဲဂုတ္တု။ ဒီအကျော်လွှားရန်အာရပ်လိဂ်စိတ္ဆႏများ၊အစ္စရေးလူဝင္မႈဝန်ဆောင်မှုများကိုယခုအများအားဖြင့်ဩစတံဆိပ်ခေါင်းစားေသာက္ခန္း'ကူးလက်မှတ်ပေါ်တွင်ဖြစ်စေရန်သို့မဟုတ်ထွက်ပေါက်မှဣ။ ကတည်းကတဆယ်ဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၃၊ဣသရေမရှိတော့တံဆိပ်ခေါင်းနိုင်ငံခြားနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မှာဘင် လေဆိပ်ပေးခြင်း၊ခရီးသည်တစ်ကဒ်အစားက:'ကတည်းကဇန္နဝါရီလ ၂၀၁၃ ရှေ့ပြေးအစီအစဉ်ရှိပါတယ်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ကာဧည့်သည်များပေးအပ်၍ထားသောအစားအင္ခြတံဆိပ်ခေါင်းပေါ်ဆိုက်ရောက်။ အေဒီကဒ်နှင့်အတူသင့်ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အထိထားခဲ့ပါ။ ဤသည်၏သက်သေအထောက်အသင့်ရဲ့ဥပဒေရေးရာင္ခြသို့ဣသရေနှင့်လိုအပ်သည်စေခြင်းငှါ၊အထူးသဖြင့်မဆိုကူးအချက်များသို့သိမ်းပိုက်တိုင်း နယ်မြေ။ ရှစ်အိႏဆဲ(၂၂ ဇွန်လ ၂၀၁၇)တံဆိပ်မှာ အခါခရီးသို့ထွက်၏။ လည်း၊အိႏဆဲတံဆိပ်(၂၂ ဇွန်လ ၂၀၁၇)မှာယော်ဒန်ချိုင့်ယီဟူစိန်နှင့် မြေနယ်နိမိတ်နှင့်အတူယော်ဒန်မြစ်။ အီရန်ငြင်းဝန်ခံရန်အရှင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ပါဝင်တဲ့အစ္စဇာသို့မဟုတ်တံဆိပ်ခေါင်းအကြောင်းထက်လျော့နည်းနှစ်လအရွယ်။ မှုကြောင့်ပြည်နယ်စစ်၏လက်ရှိအကြားယားနှင့်ဇာဘိုင္ဂ်န္၊အစိုးရ၏အာဇာဘိုင္ဂ်န္သာပိတ်ပင်ဝင်ရောက်မှုအနေဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်သည်၊ဒါပေမယ့်လည်းအားလုံးနိုင်ငံသားနှင့်နိုင်ငံသားများ၏အခြားမည်သည့်တိုင်းပြည်နေသောအနွယ်ဖွားအန်၊အသမ္မတနိုင်ငံ၏၈၈(ရှိခဲ့ဘူးသော်လည်းချွင်းချက်၊အထူးအစြဲမှာ ၂၀၁၅ ဥရောပဂိမ်းများတွင်ကျင်းပဘိုင္ဂ်န္)။ ဂျန်လည်းတင်းကျပ်စွာပိတ်ပင်မဆိုသွားရောက်ကြည့်ရှုအားဖြင့်နိုင်ငံခြားနိုင်ငံသားများအဖို့ယဉ်ကျေး၏ဒေသမှာဥရောပတိုက်-၈(အတော်လွတ်လပ်သောသမ္မတနိုင်ငံ၏)၊၎င်း၏ပတ်ဝန်းကျင်နယ်မြေ၊နှင့်အညွှန်းကိန်း ၏ကီေ၊ı Ə၊ı၊ သောဆင်၏အစိတ်အပိုင်းဘိုင္ဂ်န္သို့သော်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာ၏အာေခြင်းမရှိဘဲ၊သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုကြိုတင်အစိုးရအဇာဘိုင္ဂ်န္။ င္ငံျခားသားေသူကိုရိုက်ထည့်ထိုနယ်မြေဖြစ်ရလိမ့်မည်အမြဲတမ်းပိတ်ပင်မှဝင်ရောက်ၼ ၈ နှင့်ထည့်သွင်းမည်ဖြစ်ပြီးဒီအတွက်မိမိတို့နိုင်ငံ၏ မ '။ ရှစ်အဖြစ်ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉၊စာရင်းပါရှိသည် ၇၉၅။ တောင်းဆိုချက်ကိုအပေါ်သို့ခြင်း၊အာဏာပိုင်များ၏အကြီးအကျယ်မျက်ၼ မေင္င်းတို့၏ဗီဇာနှင့်သို့မဟုတ်တံဆိပ်ခေါင်းများကိုခွဲစက္ကူ၏အပိုင်းကိုရှောင်ကြဉ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိရိယာများခရီးသွားလာမှ၎င်းတို့နိုင်ငံ။ အချို့သောနိုင်ငံများ(ဥပမာ-သြစတြေးလျ၊ကနေဒါ၊ဖီဂ်ီ၊နယူးဇီလန်၊အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၈)ငြင်းဆိုရန်ပစ္ကကြသူရာဇဝတ်သားတစ်ဦးစံချိန်။ အစိုးရ၏တစ်နိုင်ငံနိုင်ရာ့အမတ္ရွစ္ေဟုတ္ေ ၊တားမြစ်င်းတို့။။ သာမ-မန်သုံး၊အာဏာပိုင်များ၏တစ်နိုင်ငံလည်းကြေညာင္ငံတခုမ အမြဲတမ်းသို့မဟုတ်ယာယီ၊အများအားဖြင့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သည်းခံခြင်းအတွက်လှုပ်ရှားမှု။ ကြိုးပမ်းမှုများအပါအဝင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသအားဖြင့်ပင်လယ်ကိုဆွဲဆောင်တဲ့ ၁၀ နှစ်ပိတ်ပင်ထားမှုအပေါ်ဝင်။ ကိုးကားရန်လိုအပ်သည်များအပြားနိုင်ငံများစစ်ကြောင်းအားလုံးခရီးသွား၊သို့မဟုတ်အားလုံးနိုင်ငံခြားခရီးသွား၊စေ တွင်ဆိုက်ရောက်မည်ငြင်းဝန်ခံဖို့သို့မဟုတ်တောင်မှရာေတြတည္ရွိဖို့ငြင်းလိုက်လျော။ အချို့နိုင်ငံများရှိ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ဤလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ပင်မှအကူးခရီးသူမျှဆန္ဒရှိဖို့အလျင်အမြန်ပြောင်းလဲလေယာဉ်ထက်သွား ။ ရှစ် နိုင်ငံများပါဝင်သည်ဂန်နစ္စတန်၊၈၈ အာဂ်င္တီးနား၊၉၊ကမ္ဘောဒီးယား၊၉၊ကိုးယိုးပီး ၉၊အိန္ဒိယ၊ဂျပန်၊၉၉ ပေါ်မှာအလုပ်ထွက်ခွာ၊ကိုးဂွေး၊ဆော်ဒီအာရေဗျ၊စင်ကာပူ၊တောင်ကိုရီးယား၊ကိုးနှင့်ဝမ်။ ကိုးထို့အပြင်၊အာရပ်စော်ဘွားများကျင်းပအုိင္ရီးစ္ဟာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုအပေါ်ဧည့်သည်လိုအပ်သူအတွက်လျှောက်ထားရန်အဇာ။ ၀၀ တစ်ခုမှာဗြိတိသျှပင်လယ်ရပ်ခြားနယ်မြေ။ နှစ်ခုပွင့်လင်းနယ်စပ်နှင့်အတူ။ သုံးရုရှားလက်စွဲတွင်အရှေ့ဥရောပနှင့်အာရှရှိ။ အများစုသည်၎င်း၏လူဦးရေ၏ (၈၀)ဘဝအတွက်ဥရောပ၊ရုရှား၊ထို့ကြောင့်ရုရှားတစ်ခုလုံးအဖြစ်ထည့်သွင်းအဖြစ်ဥရောပနိုင်ငံကဒီမှာ။ လေးကီလက်စွဲအတွက်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အရှေ့တောင်ဥရောပ။ ထား၏အစိတ်အပိုင်း၎င်း၏ပိုင်နက်နယ်မြေ(၃)အရှေ့တောင်ဥရောပဟုခေါ်တာကစ် ။ ငါးဂျန်နှင့်ဂျော်(တာင္ရှေ့တောင်)လက်စွဲ။ နှစ်ဦးစလုံး၏အစိတ်အပိုင်းသူတို့ရဲ့နယ်မြေတွင်ဥရောပ၏အစိတ်အပိုင်းကေး။ ခြောက်ဇက်လက်စွဲ။ ထား၏အစိတ်အပိုင်း၎င်း၏နယ်မြေများတည်ရှိပြီးအနောက်နိုင်ငံများ၏အ မြစ်အရှေ့ဥရောပ။ ခုနစ်ယားနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်များမှာလုံးဝတောင်ပိုင်းအာရှသို့သော်ရှိခြင်းလူမှုနိုင်ငံရေးကွန်နှင့်အတူ။ ရှစ်ဂုတ္တုလက်စွဲတွင်မြောက်အာဖရိကနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်း။ ရှိအစိတ်အပိုင်း၎င်း၏ပိုင်နက်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာခေါ်ယား။ ကိုး၏အစိတ်အပိုင်း၏နိုင်ငံနယူးဇီလန်။ ဆယ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအသိအမှတ်ပြု။ တကျိပ်တပါးပိုင်နယ်မြေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏။ တကျိပ်၏အစိတ်အပိုင်းနာ္ေဝ၊မ၏အစိတ်အပိုင်းအဘိဓါန္မ်ား၊အထူးပွင့်လင်း-နယ်စပ် အဆင့်အတန်းအောက်ရှယ်စာချုပ်။ တဆယ်၏အစိတ်အပိုင်းဒိန္း၊မ၏အစိတ်အပိုင်း။ တစ်ခုမှာဗြိတိသျှပင်လယ်ရပ်ခြားနယ်မြေ။ နှစ်ခုပွင့်လင်းနယ်စပ်နှင့်အတူ။ သုံးရုရှားလက်စွဲတွင်အရှေ့ဥရောပနှင့်အာရှရှိ။ အများစုသည်၎င်း၏လူဦးရေ၏(၈၀)ဘဝအတွက်ဥရောပကရုရှားနိုင်ငံ။ လေးကီလက်စွဲအတွက်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အရှေ့တောင်ဥရောပ။ အသေးစားအစိတ်အပိုင်း၎င်း၏ပိုင်နက်နယ်မြေ(၃)အရှေ့တောင်ဥရောပဟုခေါ်တာကစ် ။ ငါး ၉၊အဇာဘိုင္ဂ်န္၊ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ေတာင္ ၉ အားမကြာခဏအဖြစ်မှတ်ယူလက်စွဲ။ နှစ်ဦးစလုံးရှိသည်သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းသူတို့ရဲ့နယ်မြေတွင်ဥရောပ၏အစိတ်အပိုင်းကေး။ ခြောက်ဇက်လက်စွဲ။ အသေးစားအစိတ်အပိုင်း၎င်း၏နယ်မြေများတည်ရှိပြီးအနောက်နိုင်ငံများ၏မူလေနရာအဘိဓါန္မ်ားအားအရှေ့ဥရောပ။ ခုနစ်ယား၊၉၊ဆိုက်ပရပ်စ်၊နှင့်မြောက်ပိုင်း ၉ လုံးဝအတွက်အနောက်တောင်ပိုင်းအာရှသို့သော်ရှိခြင်းလူမှုနိုင်ငံရေးကွန်နှင့်အတူ။ ရှစ်ဂုတ္တုလက်စွဲတွင်မြောက်အာဖရိကနှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ။ အသေးစားအစိတ်အပိုင်း၎င်း၏ပိုင်နက်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာခေါ်ယား။ ကိုးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအသိအမှတ်ပြု။
ဘရာဇီးနိုင်ငံသားဥပဒေအပေါ်အခြေခံသည်နှစ်ဦးစလုံးအခြေခံမူများ နှင့်အ ။ အထွေထွေစည်းမျဉ်းအဖြစ်၊မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏မွေးဖွားဘရာဇီးအတွက်ရရှိဘရာဇီးနိုင်ငံသားမွေးဖွားချိန်တွင်၊မသက်ဆိုင်ဘဲမူလအဆင့်အတန်း၏မိဘများ၏။ နိုင်ငံသားဥပဒေထုတ်ပြန်ချမှတ်သည်အပိုဒ်နှစ်ကိုဘရာဇီးဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံ။ လူတစ်ဦးမွေးဖွားဘရာဇီးအတွက်ရရှိဘရာဇီးနိုင်ငံသားမှာမွေးဖွား။ တစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်နှင့်သက်ဆိုင်သည်သားသမီးများ၏လူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဝန်ဆောင်မှု၏တစ်ဦးနိုင်ငံခြားအစိုးရ(ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်နိုင်ငံခြားအလြန္အ)။ ဒီကိုဆိုလိုသည်ကြောင်းမိဘများနှင့်မောင်နှမများ၏အခွင့်ကလေးသူငယ်အခွင့်လျှောက်ထားရန်အမြဲတမ်းနေထိုင်အတွက်ဘရာဇီး၊မခွဲခြားဘဲ၎င်းတို့၏နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်နောက်ဆက်တွဲမောင်နှခဲ့ကြသည်။ ကြား ၁၉၉၄ႏွင့္ ၂၀၀၇၊မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အတူဘရာဇီး္ရုံးခဲ့ပါဘူးနာက္အႏွစ္ဘရာဇီးလူမ်ိဳး။ စက်တင်ဘာလအတွက် ၂၀၀၇၊နိုင်ငံတော် ခုႏွစ္ ္မှတ်ပုံတင်ခြင်း၏တဲ့နည်းလမ်းအဖြစ်လေးဇီးလူမ်ိဳး။ ရှိသည်သောသူတို့နေထိုင်ခဲ့ရာဇီးအတွက်ပိုထက်ဆယ်ငါးနှစ်ရှိပါဇခံယူဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကျေနပ်အောင်အခြားမည်သည့်အခြေအနေများအတွက် ။ လည်းရှိပါတယ်၊အနိမ့်လိုအပ်သောသူတို့အဘို့အပြောင်းရွှေ့ဖို့ဘရာဇီးအဖြစ်မရောက်သေး။ ကတည်းကဆယ်စေခြင်းငှါ ၂၀၁၆၊ဘရာဇီးကိုမလိုအပ်ပါဘူးကာက္ၾကိုစွန့်ပယ်မိမိတို့အယခင်နိုင်ငံသား။ အဆိုအရဘရာဇီးခခံဥပေဒ၊ဘရာဇီးနိုင်ငံသားများဆည်းပူးသောသူသည်အခြားနိုင်ငံသားဆုံးရှုံးစေခြင်းငှါဘရာဇီးလူမ်ိဳး။ သို့သော်၊၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကအပွဲကျင်းပခွင့်ပြုချွင်းချက်နှစ်ရပ်လွတ်လပ်မေထိန်းသိမ်းရန်ဘရာဇီးနိုင်ငံသားစဉ်လေးနောက်တစ်ခု။ ပထမအခြွင်းချက်က၏ဖြစ်ရပ်အတွက်အသိအမှတ်ပြု၏၏အ နိုင်ငံသားအားဖြင့်နိုင်ငံတကာဥပဒေ။ ဆန့်ကျင်ဖို့ရေပန်းစား၊ဤဝေါဟာရကိုမရည်ညွှန်းဖို့အသိအမှတ်ပြု၏မူရင်းဘရာဇီးနိုင်ငံသားအားဖြင့်အခြားနိုင်ငံ၊ဒါပေမယ့်ဘယ်မှာကိစ္စများအခြားနိုင်ငံသားဖြစ်အသုံးပြု(အားဖြင့်မွေးဖွား သို့မဟုတ်နွယ်ဖွားဆန့်ကျင်အဖြစ်၊)။ ရှိမရှိအခြားနိုင်ငံအသိအမှတ်ပြုဆာင္တာမ်ားနိုင်ငံသားသက်ဆိုင်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအခြွင်းချက်အမှုအတွက်အခြားတိုင်းပြည်လိုအပ် လူတစ်ဦးအတွက်ဆက်လက်နေထိုင်ခဲ့သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းမှနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးရှိပါတယ်။ သော်လည်းအစိုးရမှအာဏာကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဘရာဇီးနိုင်ငံသားသောသူတို့၏ဆန္ဒအလျောက်ခံယူပြီးအခြားနိုင်ငံနဲ့ဘဲကျေနပ်တ၏ချွင်းချက်၊အလေ့လျှောက်ထားရန်ဤခြွင်းချက်အလွန်ကျယ်ပြန့်၊နှင့်အလေ့အကျင့်သာသြာဘရာဇီးနိုင်ငံသားဆိုရင်လူတစ်ဦးဖဲကြိုးတာင္းဒါကြောင့်၊သို့မဟုတ်အလွန်ခဲယဉ်းအတွက်ခြွင်းချက်အခြေအနေ။ ဥပမာ၊၂၀၁၃ ခုနှစ်ကဘရာဇီးအစိုးရခြင်းခံရသောနိုင်ငံသားတစ်ဦး၏အခွင့်ပြည်သူကာက္ၾအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ၊အ သူမကိုနိုင်ငံ(ဘရာဇီးဖွဲ့စည်းပုံခွင့်ပြုမထားဘူးနရာျဖစ္သည္။၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံသား)။ ထိုဆုံးဖြတ်ချက်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ဓိဖက်ဒရယ်တရားရုံးတွင် ၂၀၁၇ ခဲ့ပါတယ်လွှဲသာ ၂၀၁၈။ သောသူတို့ဆုံးရှုံးဘရာဇီးနိုင်ငံသားအမှုကြောင့် အခြားတိုင်းပြည်များတွင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်၎င်း၏အ အခြေအနေပေါ်တွင်သူတို့စွန့်ပယ်ပါလိမ့်မည်အခြားနိုင်ငံသား။ ပြီးနောက်ဘရာဇီးနိုင်ငံသားအ ၊အလျာက်ရှိရှစ်လအတွင်းပြသနိုင်ဖို့အထောက်အထားတို့ကိုအခြားနိုင်ငံသား။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ပြုအဖြစ်ဒီအကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန်အ ။ လိုင္စင္ျလွတ်လပ်ခွင့်ပြုရန်လည်း၎င်းတို့၏ယခင်နိုင်ငံသား။ သူတို့ကဆုံးရှုံးစေခြင်းငှါဘရာဇီးနိုင်ငံသားပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လျှင်လှုပ်ရှားမှု၏ယူဆ'အန္တရာယ်ကိုအမျိုးသားရေးအကျိုးစီးပွား'။ ဘရာဇီးနိုင်ငံသားအဘယ်သူသည်ကိုလည်းအခြားနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းသောရိုက်ထည့်ရန်ခွင့်ပြုထားခဲ့ရာဇီးနှင့်အတူအဆိုပါနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၏အခြားတိုင်းပြည်အတွက်အတူပေါင်းစပ်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်း ဘရာဇီးနိုင်ငံသားအဖြစ်ဘရာဇီးအထောက်အထားကဒ်သို့မဟုတ်အခွင့်သက်တမ်းကုန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်။ သူတို့ပြုလျှင်မပေးထိုကဲ့သို့သောစာရွက်စာတမ်း၊သူတို့နေဆဲအဝင်ဘရာဇီးအဖြစ်င္ငံျခားသားမ်ား၊ဘာသာရပ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုန့်အဖြစ်။ သို့သော်၊အများအားဖြင့်ဤကိစ္စတွင်သာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘရာဇီးကိုမလိုအပ်ပါဘူးအဇာမွ အခြားနိုင်ငံသား။ ဘရာဇီးသာကိစ္စရပ်များဇာကိုနိုင်ငံသားများအတွက်ခြွင်းချက်အခြေအနေ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများအတွက်နိုင်ငံခြားအစိုးရအလုပ္အခြင့္အလမ္းမ်ားကြောင်းတားမြစ်အသုံးပြုခြင်း၏အဘရာဇီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။ ဗီဇာလိုအပ်ချက်များကိုများအတွက်ဘရာဇီးနိုင်ငံသားများအုပ်ချုပ်ရေးင္ခြကန့်သတ်ခြင်းအားဖြင့်အစိုးရ၏ပြည်ထောင်စုအပေါ်ထားရှိနိုင်ငံသားဇီး၏။ ၏အဖြစ်ခုနစ်ဇန်နဝါ ၂၀၁၉ ဘရာဇီးနိုင်ငံသားဖူးဇာ-အခမဲ့သို့မဟုတ်ဗီဇာအပေါ်ရောက်ရှိလာမှဝင်ရောက်ခွ ၁၇၁ နိုင်ငံများနှင့်နယ်မြေအဆင့်၊အဆိုပါဘရာဇီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၁၇၏စည်းကမ်းချက်များ၌ခရီးလွတ်လပ်ခွင့်အရည္အက်ႌဇာကန့်သတ်အညွှန်းကိန်း။ ထီးဘရာဇီးနိုင်ငံသားတစ်ဦး ၁၂-တစ်လစစ်မှုထမ်းတာဝန်များ၊မဟုတ်လျှင်အဆိုပါနိုင်ငံသားအ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေ၊သို့မဟုတ်လျှင်အပြည်ရန်ဆန္ဒရှိပါဘူးစေခံနှင့်စစ်ရေးအတွေ့လုံလောက်တဲ့ဝန်ထမ်းကူညီပံ့ပိုးရန်၎င်း၏လိုအပ်ချက်များကို။ ထို့ကြောင့်ပေမယ့်မှတ်ပုံတင်အစစ်မဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်၊အကြောင်း ၉၅ သောသူတို့၏မှတ်ပုံတင်ရရှိသည့်ကင်းလွတ်။ အထီးနိုင်ငံသားများအကြားခဲ့ရပြီးလေး-ငါးနှစ်အတွင်းအသက်အရွယ် အပ်ပြင်ဆင်ရန်စစ်ရေးမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်လျှောက်ထားတဲ့အခါဘရာဇီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။ မဲဘရာဇီးအတွက်မဖြစ်မနေအတွက်နိုင်ငံသားများအကြားရှစ်ယောက်ခုနစ်ဆယ်နှင့်သက်အရွယ်အနှစ်။ အဲဒီမမဲေသးဘူးအကြာတွင်အပြင်နှစ်သက်ဖွယ်အမျှ(ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ဝေးကနေသူတို့ရဲ့မဲတည်နေရာမှာထိုအချိန်က)ပေးဆောင်ရပါမည်များ ၃။ ငါးဆယ်-တ ။ နိုင်ငံသားများအကြားရှစ်နှင့်ခုနစ်ဆယ်နှစ်အသက်အရွယ်လိုအပ်အပြင်အထောက်အထားမဲလိုက်နာ(ရှိခြင်းအားဖြင့်မဲ၊ခိုင်လုံမရှိခြင်းသို့မဟုတ်ဒဏ်ငွေပေးဆောင်)လျှောက်ထားတဲ့အခါဘရာဇီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။ သုံးရုရှားလက်စွဲတွင်အရှေ့ဥရောပနှင့်အာရှရှိ။ အများစုသည်၎င်း၏လူဦးရေ၏(၈၀)ဘဝအတွက်ဥရောပ၊ရုရှား၊ထို့ကြောင့်ရုရှားတစ်ခုလုံးအဖြစ်ထည့်သွင်းအဖြစ်ဥရောပနိုင်ငံကဒီမှာ။ လေးကီလက်စွဲအတွက်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အရှေ့တောင်ဥရောပ။ အသေးစားအစိတ်အပိုင်း၎င်း၏ပိုင်နက်နယ်မြေ(၃)အရှေ့တောင်ဥရောပဟုခေါ်တာကစ် ။ ငါးဂျန်နှင့်ဂ်ာ္ဂ်ီ(တာင္ရှေ့တောင်) လက်စွဲ။ နှစ်ဦးစလုံးရှိသည်သေးငယ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းသူတို့ရဲ့နယ်မြေတွင်ဥရောပ၏အစိတ်အပိုင်းကေး။ ခြောက်ဇက်လက်စွဲ။ အသေးစားအစိတ်အပိုင်း၎င်း၏နယ်မြေများတည်ရှိပြီးအနောက်နိုင်ငံများ၏မူလေနရာအဘိဓါန္မ်ားအားအရှေ့ဥရောပ။ ခုနစ်ယားနှင့်ဆိုက်ပရပ်စ်(မြောက်ပိုင်းဆိုက်)လုံးဝအတွက်အနောက်တောင်ပိုင်းအာရှသို့သော်ရှိခြင်းလူမှုနိုင်ငံရေးကွန်နှင့်အတူ။ ရှစ်ဂုတ္တုလက်စွဲတွင်မြောက်အာဖရိကနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်း။ အသေးစားအစိတ်အပိုင်း၎င်း၏ပိုင်နက်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာခေါ်ယား။
သင်ရှာဖွေနေပါကခြံမြေဝယ်ယူရန်အတွက်ဂီ၊ထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ချေး၊အပေါင်ခံဘို့အတွက်ရွေးချယ်စရာများကျွမ်းကျင်သူများ၊ပေါင်နှံဏန်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များရတဲ့၏ အပေါင်ခံဂီအတွက်။ သင်စဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်အိမ်တအိမ်ဝယ်ဂီအတွက်၊သင်ပုံမှန်အားဖြင့်တွေ့အဘယ်သူမျှကန့်သတ်ခြင်းနှင့်အဆင်သင့်ဗီဇာအစီအစဉ်များအတွက်နိုင်ငံတကာဝယ်လက်၊ေဖစ္ရလပ္စဂီအတွက်သြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်ဘယ်လောက်ချေးနိုင်။ ဤလမ္းညႊန္တြင္အဘယ်အရာကိုသင်လိုအပ်ကြောင်းကိုသိရန်အပေါင်ခံသည့်စနစ်အတွက်မြန်မာ။ အတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်သင်ကဝယ်ဂီအိမ်ခြံမြေ၊သငျသညျကနေအကြိုးပွုနိုငျကြောင်းအနိမ့်အပေါင်ခံနှုန်းထားများနှင့်၊သက်ဆိုင်လျှင်၊ဂီရဲ့တီဗီဇာအစီအစဉ်။ သင်ပိုမိုထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းညွှန်ဝယ်ယူအပေါ်အိမ်ခြံမြေအတွက်မြန်မာ။ အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းများဂီအတွက်ပြန်လည်ဆယ်တင်နိုင်ပါပြီသိသိသာသာခဲ့သည့်အတွက်အနည်းငယ်နှစ်၊၂၀၁၇ သူတို့နောက်ဆုံး စျေးနှုန်းကအရင်ကမြင် ၂၀၀၈ အိမ္ရာ။ မြို့ကဲ့သို့သောအဖြစ်လစ္စနှင့်ဒေါင်လိုက်၊စိုးရိမ်ပူပန်မှုများပင်ထမြောက်ကြောင်းဈေးနှုန်းများမြင့်တက်လာလွန်းလျင်မြန်စွာ။ နှောင်းပိုင်းတွင် ၂၀၁၈၊အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အေဂျင်သုန်ရဲ့အခိုင်အမာပျမ်းမျှစျေးနှုန်းဂီအတွက်တိုးမြှင့်နိုင်သလောက်အားဖြင့် ၇-၈ ကြားနှင့် ၂၀၁၉၂၀၂၀။ ထို့အပြင်၎င်း၏အိမ္ရာ ဈေးကွက်၊ဂီ၏ခြုံငုံစီးပွားရေးစနစ်ကိုတိုးတက်၊နှင့်အတူတိုးတက်မှုအတွက် ၂၀၁၉ မှာနှစ်။ မရှိကန့်သတ်အပေါ်မ-ဥေနေထိုင်သူများဝယ်ယူအထဲတြင္ေပၚတူဂီ၊အစိုးရအလုပ်အနိုင်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ သို့သော်၊အများဆုံးဘဏ်များသာချေးငွေများကိုဆက်ကပ်အထိ ၆၅-၇၅၏ပိုင်ဆိုင်၏တန်ဖိုးသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းစျေးနှုန်း(ကိုမဆိုအနိမ့်)သို့ဒေသခံများ။ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်နေထိုင်ဂီ(ကျနော်။အီး၊သောသူတို့သည်ပေးဆောင်အခွန်အရပ်)နိုင်မည်အချေးတက်ဖို့ ၈၅-၉၀၏ရောင်းချခြင်းစျေးနှုန်းအချို့ကိစ္စများတွင်။ ကမ်းလှမ်းခြင်းမပြုမီသင်ချေးငွေ၊အပေါင်ခံပံ့ပိုးပေးဂီအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်လိမ့်မည်သင်သည်သင်၏ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေ။ အများဆုံးအပေါင်ခံငွေချေးခွင့်ပြုမည်မဟုတ်အချုပ်အခြာ၏လက်ရှိအကြွေးနှင့်အသစ်ရဲ့အပေါင်ခံငွေပေးချေမှုကျော်လွန်ဖို့မယ့်ငါးများသင့်ရဲ့လစဉ်ဝင်ငွေအခွန်ပြီးနောက်။ အများစု၏ဤအကောင့်သို့ယူသင့်ကွန်ဆင်၊အာမခံနှင့်အပေါင်ခံအိမ်ခြံမြေအခွန်များ၊ပြီးတော့တွက်ချက်ခန့်မှန်းခြေလစဉ်အပေါင်ခံဆပ်။ အပေါင်ခံဏန်းကနေ ဘဏ္ဍာရေးလည်းထောက်ပံ့လင့်များဖို့ငွေချေးနှင့်အမျိုးမျိုးသော မိမိတို့အပေါင်ခံထုတ်ကုန်များအဆိုပါနှိပ်ခြင်းပြီးနောက်တွက်ချက်။ အပေါင်ခံနှုန်းထားများအတွက်ဂီခဲ့ကြယိုတသမတ်တည်းကတည်းကပထမဦးဆုံးအပတ် ၂၀၁၄၊အခါသူတို့ကပျမ်းမျှ ၃။ သုံးဆယ့်ခုနစ်၊အဆိုအ ။လတ်တလောဒေတာတွေကိုအပေါ်အခြေခံပြီး၊တတိယပုံ၂၀၁၈၊ပြပွဲတစ်ခုပျမ်းမျှဂီပေါင်နှံမှုနှုန်းပဲ ၁။ သုံးဆယ်သုံး။ အများဆုံးအဖိုးအခများရေးရဲ့ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ဝယ်ယူစျေးနှုန်း၊၏ချွင်းချက်နှင့်အတူစာချုပ်စာတမ်းအခကြေးငွေ။ အလုပ်အတွက်ပေါ်တူဂီအစိုးရနှင့်တရားစွဲဆိုထားပါသည်စေရန်နှင့်အတူအိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ်ဥပဒေရေးရာဖြစ်ပါသည်၊စနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အားလုံးအခကြေးငွေပေးဆောင်နေကြ။ ယခင်က၊ဟာသူတို့ရဲ့အခကြေးငွေဖွဲ့စည်းပုံမှာခဲ့သည်မှချည်ထားသောအဝယ်ယူစျေးနှုန်း။ အခုတော့၊သို့သော်၊အယူႏိုင္ပါစွဲချက်ခန့်မှန်းခြေ ၁၅၃ႏွအရောင်းအဝယ်၊အပေါင်း ၁။ နှစ်ဆယ်ငါးႏွပြင်ဆင်ချက်သို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းလာ့။ ျပိဳင္ဘက္ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်အစဉ်အလာတ်တစ်ခုပြောင်းရွှေ့ကြေးအခွန်အပေါ်အခြေခံပြီးအိမ်ခြံမြေတန်ဖိုးနှင့်ရည်ရွယ်ချက်၏အအိမ်ခြံမြေနှင့်အတူ၊နှုန်းများအလားအလာရောက်ရှိရှစ်၏ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုရဲ့တန်ဖိုးအချို့ကိစ္စများတွင်။ တစ်ဦးအပိုဆောင်းတံဆိပ်ခေါင်းတာဝန်၏ ၀။ ရှစ်လည်းပေးဆောင်အချို့သောအခြေအနေ၊အစဉ်အသစ်-တည်ဆောက်ဂုဏ်သတ္တိများမှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြတြက္သာျမှာနှစ်ဆယ်သုံး။ ထို့အပြင်အတွက်အခွန်များကြောင့်ဝယ်ယူအပေါ်သို့အပေါ်တူဂီခံေျမ၊ဝယ်လက်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်စေခြင်းငှါဝင်ငွေအပေါ်အခွန်ငှားရမ်းခဝင်ငွေသို့မဟုတ်မြို့တော်ကိုလာဘ်အခွန်အခါအိမ်ခြံမြေရောင်းချသည်။ -ဒေသခံများ၊ငှားရမ်းခဝင်ငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံဟာပြားချပ်ချပ်နှုန်းနှစ်ဆယ်ရှစ်။ အိမ်ခြံမြေပိုင်ရှင်များနုတ်နိုင်ပါကနှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ်များထိန်းသိမ်းခြင်း၊ပြုပြင်ရေး၊အာမခံနှင့်သာယာအခွန်အဖြစ်စီးပွားကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်ခြင်းမပြုမီစုစုပေါင်းအခွန်ကြောင့်။ သို့သော်၊မပေါင်ခံအကျိုးစီးပွားမအပေါင်ခံအာမခံနှုတ်ယူပြီးဖြစ်ပါသည်။ နေထိုင်သူများထည့်ငှားရမ်းခဝင်ငွေအခြားဝင်ငွေအရင်းအမြစ်များနှင့်တွက်ချက်ဝင်ငွေအခွန်အခမှာထိုစံနှုန်းများ။ မြို့တော်ကိုလာဘ်အခွန်မခံျပေးရမှာပြားချပ်ချပ်နှုန်းနှစ်ဆယ်ရှစ်နှင့်ပေးဆောင်ရမည့်အချိန်ရာင္းရန္ရွိသည္။နေထိုင်သူများထည့်မိမိတို့အနှီးအကျိုးအမြတ်ကိုသူတို့၏ဝင်ငွေဖို့၊တရားစွဲဆိုခံရမှာအဆင့်အတန်းအခွန်နှုန်း။. အကယ္ရာင္းအမြတ်အစွန်းအတွက်အသုံးပြုကြသည်အခြားပေါ်တူဂီခံေျမ၊သာနှစ်ဆယ်၏အသားတင်အကျိုးအမြတ်များမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်အနှစ်။ လျှင်အိမ်တစ်မူလတန်းနေအိမ်သို့၊ရောက်သည်ဝင်ငွေခွန်ခွန်၏တစ်နှစ်အတွက်-မဟုတ်လျှင်အဆိုပါငွေများကိုအသုံးပြုကြသည်နှစ်နှစ်အတွင်းဝယ်ယူဖို့အခြားမူလတန်းနေအိမ်သို့အတွက်၊အကျိုးအမြတ်များမှာအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်။ တစ်ဦးကမှတ်သားလောက်သောပြဿနာအတွက်အခွန်ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းမ-ဒေသခံများမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှသာပေါ်သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေပေါ်တူဂီ။ ဒေသခံများ၊သို့သော်ငြားလည်း၊ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအပေါ်၎င်းတို့၏ကမ္ဘာပေါ်တွင်-ကျယ်ပြန့်။ ကြောင့်နေထိုင်ခြင်းဖြင့်အစပျိုးနိုင်ပါသည်ခံရဂီအတွက်အထက်ပိုပြီး ၁၈၃ ရက်အတွက်ပေးပြက္ခဒိန်နှစ်တစ်နှစ်၊သို့မဟုတ်အားဖြင့်ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအစိုးရဖတ္ခဲ့တဲ့'ထား'နေအိမ်၊သူတို့ရှာကြံရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အတွက်လူနေအိမ်ခြံမြေအတွက်ဂီစေခြင်းငှါဆန္ဒရှိ၏အကြံပေးချက်ကိုရှာခြင်းငှါပေါ်တူဂီအခွန်ကျွမ်းကျင်သူအဘို့အသင့်လျော်သောအခွန်စီမံကိန်း။ ဖို့ပြင်ဆင်နေကြသောအခါယူတစ်ခုထွက်ပေါ်တူဂီအပေါင်ခံ၊သင်မေးစေခြင်းငှါအပြင်အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများအဖြစ်လည်းကောင်းမူရင်းသို့မဟုတ်လက်မှတ်မိတ္တူ:ခံေျမအသေးစိတ်များကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်အိမ်ခြံမြေအစီအစဉ်ကို၊အခွန်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုဖေါ်ပြသောအိမ်ခြံမြေအခွန်ကိုလက်ရှိများမှာ၊ေျမကြက္တုိက္ဆုိင္မႈ စာရွက်စာတမ်းများဖြင့်လက်ရှိပိုင်ရှင်များနှင့်မည်သည့် ၊ကျိန်းဝပ်လိုင်စင်များကိုဖေါ်ပြနေအိမ်အလာက်ေသာစားဝတ်ေ၊စစ်တမ်းနှင့်အဘိုးပြတ်အကဲဖြတ်ခြင်း၊နှင့်စွမ်းအင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်။ လည်း၊အခပေးဆောင်နိုင်ရန်အတွက်အခွန်များကြောင့်အပေါ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးလွှဲပြောင်းကံ၊သင်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အဆောင်အရေအတွက်ပေါ်တူဂီနှင့်ရန်လိုပေမည်ဖွင့်ဖို့တစ်ဘဏ်အကောင့်။ သင့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်အရေအတွက်ရရှိခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းအခွန်ရုံး။ သင်ရှိသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင့်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးစာရွက်စာတမ်းများအဆင်သင့်သင်စျေးဝယ်စတင်များအတွက်အပေါင်ခံအပေါ်အကြို-အတည်ပြုချက်အတွက်အခြေခံ။ ဘဏ်များကိုအားသွင်းစေခြင်းငှါအမ-ကတိကဝတ်ပြန်လည်အခကြေးငွေတက်မှခြောက်ရာများအတွက်ချေးငွေပမာဏအထိ ၇၅၀၊၀၀၀ နှင့်အတူ၊ပိုမိုမြင့်မားအဖိုးအခထက္ဒီအဆင့်။ တစ်ချိန်ကသင်ရွေးချယ်ထားပြီးပြီသင်၏အိပ်မက်ပေါ်တူဂီအမ်ိဳးရှိသည်ဖြစ်စေလက်ခံကမ်းလှမ်းမှုကိုသို့မဟုတ်အရောင်းစာချုပ်အတွက်နေရာနှင့်ရောင်းချသူနှင့်အတူ၊သင်ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ကျန်ရှိနေသောစာရွက်စာတမ်းများကိုသင့်ရဲ့အပေါင်ခံငွေစုငွေချေးနှင့်လိုက်နာသည့်လျှောက်လွှာကိုလုပ်ငန်းစဉ်အလားတူသောအကြီးဥရောပ၏။ နီးပါးရှိသမျှပေါင်ကျောင်းအုပ်ကြီးပေါင်းအကျိုးစီးပွားချေးငွေများ၊သော်လည်းဘဏ်နှစ်ခုလုံးကိုပူဇော် -ေမှုနှုန်းမှာပေါင်။ အချို့ေမှုနှုန်းမှာပေါင်လည်းအတူတူပင်များအတွက်လစဉ်ငွေပေးချေမှုသို့မဟုတ်မိနစ်ငွေပေးချေမှုနှင့်ကွဲပြားအရှည်ချေးငွေ၏။ အကျိုးစီးပွားကိုသာပေါင်များသောအားဖြင့်သာပူဇော်အသစ်တည်ဆောက်၊နှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်သာ-အခေါ်အဝေါ်။ အများဆုံးပေါင်ဂီအတွက်ပွေးအတွက်နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်၊သင်တို့မူကားရနိုင်စည္းကမ္းတက်ဖို့နှစ်သုံးဆယ်။ ဘဏ်များအမျိုးမျိုးကွဲပြားအမြင့်ဆုံးအခွင့်အသက်အရွယ်၏ငွေချေးနိုင်သည့်ကန့်သတ်ဝေါဟာရကိုအဖွဲ့အစည်းခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ အများစုမှာဘဏ်များကိုမပူဇော်ပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးအပေါင်ခံနေသောလူတစ်ဦးချင်းစီမှကျော် ၇၀-အသက်အနှစ်ပေမယ့်အချို့တိုးချဲ့လိမ့်မည်ဤအကန့်သတ်မှ ၈၀။.
မေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ။ ငါပြောချင်သောအခြားအဖြေပြီးသားအထိအမျိုးမျိုး၊အဓိကအချက်ဖြစ်ပါတယ်:အခြေအနေ။ ဒါဟာနည်းနည်းကြိုက်မေး:"ငါအလိုရှိလျှင်ကိုယ်အဂၤလိပ္စာေလ့လာရာတစျခုအကောင်း၊အမေရိကန်။"။ ဒါကြောင့်အဘယျသို့အပေါ်မူတည်စဉ်းစား"ကောင်း၏"။ သင့်ရည်မှန်းချက်သည်အပိုလို"တိုင်းပြည်အတွေ့အကြုံ"၊သင်ကြားကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြားခြားနားချက်များအကြောင်းနှစ်ဦးစလုံးလာသောအဓိကကွဲပြားခြားနားမှုအတွက်အားလုံးနီးပါးရှုထောင့်မှလွဲဘာသာစကားနှင့်ရှေးဟောင်းဘုံနည်း။ ေပၚတူဂီအနေနဲ့ဥရောပအသေးစား(၁၀ သန်း)နှင့်အကြိမ်အများဆုံးတိပြည်၊မြင့်နှင့်အတူလူ့ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်လုံခြုံရေးအနှုန်းများ၊အသေးပွားလျော့နည်းဖွံ့ဖြိုးအများဆုံးထက်အနောက်ဥရောပနှင့်အတူ၊သမနှင့်အတထောင်နှစ်နိုင်ငံသမိုင်း၊၏အိမ်နီးနားချင်းအားလုံးအခြားအဓိကဥရောပနိုင်ငံများ၊အရာအားလုံးကိုပိုပြီးတရားဝင်နှင့်အအေးရာဇီး၊ပေါ် အခြားဘက်ခြမ်းတစ်အကြီးစားနဲ့အတော်လေးအသစ်နိုင်ငံအများစုကိုအမေရိကအတွက်၊နှင့်အတူကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအယူခံဝင်၊နှင့်အတူအများအပြားအမျိုးအစားများ၏သီဥတုဒါပေမဲ့အနီးကပ်မှအပူပိုင်းအတောက်ပနှင့်အသက်နိုင်ပြီးစိတ်အေးလက်အေးကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနှင့်အတူပြင်းထန်သောပြဿနာများ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်မြို့ပြအကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်အကျင့်ပျက်ခြ၊ဒါပေမယ့်သို့ရာတွင်အအားအနာဂတ်အတွက်အကြောင်းအမည်မလွဲကျော်သူအပေါင်းတို့သည်စိန်ခေါ်မှုများ။ တင်းကြပ်စွာ၏ဝေါဟာရများအတွက်"ဈေးကွက်အလားအလာ"၏ဘာသာစကား၊ငါပြောချင်:အဘို့အသွားအဘရာဇီးပေါ်တူဂီ။ သင်ဆဲနားလည်ဖို့အားလုံးအမှတ်တံဆိပ်ပေါ်တူဂီ(အချို့ဒေသဂီယာလမ်းခက်ခဲနားလည်သဘောပေါက်ရန်၊လမ်းဖြင့်၊အထက်ပျမ်းမျှမြို့ပြဘရာဇီးပေါ်တူဂီ။)၊ ပြီးစေခြင်းငှါကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုဖြစ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်"ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလုပ်ဈေးကွက်"၊အရာသုံးမ်ိဳးအားဖြင့်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံသည့်အခါ၊ငါထွက်ကျန်ရစ်၏အလုပ်အကိုင်အခွင့်နေထိုင်စဉ်အတွက်အင်္ဂလန်အချို့သောလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကြောင့်ငါသည်အပြောအတြက္ဗားရှင်း။ ဒါဟာဂိမ်းကစားခြင်းဆော့ဖ်ဝဲလ်ကုမ္ပဏီဘယ်လိုကြီးပွားဖို့အတွက်ပေါ်တူဂီဘာသာစကားနယ်ပယ် နှင့်လိုအပ်ပါကဘာသာပြန်၊အိပ္ခ၊အရေး၊အမျိုးတွေအားလုံးလွတ်လပ်တဲ့အထိပြသမှာအင်တာဗျူးခဲ့ငှားရမ်းနှင့်သာစုံတွဲတစ်တွဲသို့မဟုတ်ဒီတော့ဂီတည်းခို။ သောကြောင့်၊၊အ သို့မဟုတ်ချင်သောကုမ္ပဏီအလုပ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှု၊၏တပြင်လုံးကိုပေါ်တူဂီ၏အရွယ်အစားသည်မြို့တော်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါ။ ဆာ:အဆိုပါမေးခွန်းအလိုလိုခဲ့၊ငါသတိထားမိတယ်။ ငါ့အဖြေကိုဘယ္သူကေမးခြန္းသောမေးသောလူမျိုးတစ်မျိုး၏ဂီခဲ့သင်ယူဖို့ပိုကောင်း၊အမရာ။ ဥရောပပေါ်တူဂီဖြစ်လေ့ခက်ခဲလေ့လာဖို့မှကြွလာသောအခါ ။ အသံဟာပိုပြီးပိတ်လိုက်သောအထက်ဘရာဇီးပေါ်တူဂီ။ ငါဖတ်ပြီးပါပြီအကြိမ်ပေါင်းများစွာ(သာသာ ၊ဒါပေမယ့်အင်တာနက်ကိုပတ်လည်၌အထွေထွေ)၊များစွာသောလူသူမဟုတ်ဇာတိဂီစကားပြော-ဒါပေမယ့်အတော်လေးကောင်းဘရာဇီးပေါ်တူဂီအဆင့်-နားမလည်နိုင်ခဲ့မှာအားလုံးတစ်ဦးမိခင်ဘာသာစကားပေါ်တူဂီထံမှဂီင်း ။ အများဆုံးအလေ့မှတ်ချက်သံကလုံးဝအတူတစ်ဖွဲ့လုံးသစ်ကို။ လွတ်လပ်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရှိသည် ခဲယဉ်းအချိန်နားလည်သဘောပေါက်ပြီး။ ဒါဟာသာက:ငါတို့သည်လည်းပြောဆိုလေ့။ ပတ်ပတ်လည်လေးလလောက်ကြာသွားခဲ့တယ်တွက်ရက်စွဲတစ်ခုနှင့်အတူဘရာဇီးကောင်လေးဆုံတွင်(ပြတင်းပေါက်ဖုန်းရဲ့အမည္တူကိုက်ချွတ်)။ အစပိုင်းမှာသူတင်ရယ်နဲ့ကျွန်မသူ့ကိုမေးအဘယ်ကြောင့်။ သူကမေးတယ်(အလွန်ကျေး)နိုင်လျှင်နှေးကွေးသောကြောင့်မနားလည်သဘောပေါက်အလွန်ကောင်းစွာအဘယ်သို့ငါတကားဟုခဲ့သည်။ အရာအကြောင်းပြောနေတာခဲ့သည်အတွက်အသင့်ရဲ့ပုံမှန်ဥရောပပေါ်တူဂီစကားပြောအရှိန်အဟုန်။ ငါနှေးကွေးခဲ့တယ်အရာအားလုံးကိုနားလည်ကြောင်းပြောပါတယ်။ ငါတွေ့ကြည်နူးစရာ၊ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မတို့တွေဟာအလွန်တူညီသောဘာသာစကားနှင့်အရတယ်ပြောနှေးအောင်အခြားနားလည်နိုင်။ သင္ယူဥရောပပေါ်တူဂီအားသာချက်ကိုပေးတော်မူ၏ကြောင်းသင်နားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်ဘရာဇီးပေါ်တူဂီပိုပြီးအလွယ်တကူအထက်ကိုခင်ဗျားနားလည်ဥရောပပေါ်တူဂီလျှင်သင်ပြောခွင့်ဒါပေမယ့်လမ်းခက်ခဲတက်ခူးဖို့။ ထင်မထားဘူးဆိုရင်သင်အချိန်နှင့်စိတ်ရှည်ဖို့သင်ယူဥရောပပေါ်တူဂီ၊ငါသည်အကြံပြုပါသည်ဘရာဇီးပေါ်တူဂီပထမဦးဆုံးနှင့်၊သင်ချင်ပါတယ် ကြိုက်ဖို့ကြိုးစား၊ပြီးတော့သင်ယူနည်းနည်း၏။ အစကဘယ်မှာပေါ်မူတည်နေဟန်အသက်ရှင်ရန်။ လျှင်သင်ဟန်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ပေါ်တူဂီနီနိုင်ငံသို့မဟုတ်ဒေသအတွက်အာဖရိကသို့မဟုတ်အာရှင့်အကြံပြုပါသည်ဥရောပပေါ်တူဂီ။ ဆိုရင်ခေါင်းစဉ်များအတွက်ဘရာဇီး၊ဘရာဇီး။ ကိုယ့်အကြောင်းကြောင်းအကြှနျုပျ၏ထောက်ခံချက်ဒါပေမယ့်အကယ်၍သင်တို့မသေချာကြောင်း၊ပဲေဒီနေရာမှာတစ်ဦးစုံတွဲဗီဒီယိုများ၊ပထမဦးဆုံးအတွက်ဥရောပပေါ်တူဂီ၊ထိုအထဲတြင္ဘရာဇီး၊ဒါကြောင့်သင်ကြားနိုင်ဘူးသူတို့က။ စွန့်ခွာထွက်ပေါ်တူဂီနှင့်ဘရာဇီးက၊အရာပိုမိုလိုလားအပ်သောအခြားပေါ်တူဂီစကားပြောနိုင်ငံများ၊ဘရာဇီးပေါ်တူဂီသို့မဟုတ်ဂီ။ ျပင္သစ္စာသို့မဟုတ်ဂီ။ ငါလေ့လာသင်ယူချင်။ ငါသွားချင်တဲ့ကိုဘရာဇီးနဲ့ပြင်သစ်ဒါပေမဲ့ပေါ်တူဂီလွယ်ကူသည်။
စေလျှင်ဆုံးဖြတ်ချက်အသက်ရှင်ရန်နှင့်အလုပ်ဂီအတွက်အဖြစ်တစ်ဦးအလွတ်တော့၊သင်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ပြဿနာ ဗာ။ ဒီအလွှာက ၏ဝန်ဆောင်မှုနှင့်လွှဲပြောင်းငွေများအကြားဝယ်သူနှင့်ရောင်းသူများကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှု။ ဒီ ç သတိပြုမိဖြစ်ဖို့အားလုံးလှုပ်ရှားမှုများနှင့်သင်တို့အဘို့အအတိအကျဘာကိုသိ။ တစ်ဦးအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-အလုပ်လုပ်ကိုင်အလုပ်သမားဂီအတွက်ဖြစ်နိုင်ကြောင့်ထိုသို့ပြုမှအွန်လိုင်းဒါပေမယ့်သို့သော်အလွန်အရေးကြီးကြောင်းကြားဖို့အားလုံးသတင်းအချက်အလက်ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်ကြီးမားသောဒဏ်ငွေ။ အဆင့်များဖြစ်ကြောင်းအဘယျသို့အမိန့်အတွက်အားသြင္းဂီအတွက်။ ၊ကျွမ်းကျင်သူများ၌လက်ထောက်လစ္စနှင့်ပေါ်တူဂီ၊သင်ပြောပြအရာအားလုံးကိုဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ပြဿနာတစ်ခု ဂေါဂီအတွက်၊အဆင့်ဆင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ဒါကအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ မေးခွန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးခဲ့သည့်ခြေလှမ်း:လိုလျှင်အဘယ်သို့လိုင်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌။ ကိုယ့်နေဆဲပုံကိုပေးပို့ဖို့လိုအပ်သူတို့ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးစိမ်းရောင်လက်ခံရရှိ။ သူတို့တွေကအလွန်အမင်းရှုပ်ထွေး။ အဆုံး အလုပ်အပိုဆုနှင့် ဆပ်ဂီအတွက်:သင်လိုအပ်သမျှကိုသိတွက်ချက်နိုင်ရန်အတွက်သိသင့်အခွင့်အရေးအမှုအတွက်အလုပ်အကိုင်စာချုပ်ရပ်စဲခြင်းကြောင့်ပြည်တွင်းတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ-လုပ်ငန်းတာဝန်များ၊မှတ်ပုံတင်စည်းကမ်း၊အခွင့်အရေး:သင်အရာအားလုံးကိုအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်ကြောင်နှင့်ခွေးအတွက်မြန်မာ။ ဇကျွမ်းကျင်သူများ၌လက်ထောက်လစ္စနှင့်ပေါ်တူဂီ။ ရှိမရှိသားလစ္စဘွန်းတွင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ရွှေ့ဖို့ဂီ၊ဇရာအားလုံးကိုသိတော်မူခြင်းနှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်၏ပြည်ပ။ မွကားအတွက်တရားဝင်ဖြစ်စေ၊ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ငြ၊ေအးဂ်အခွန်အစစ်အစိုးရ၊စတင်တည်ထောင်သည်:စေဘော့သင်ကူညီနှင့်ပျော်မွေ့နေစဉ်ကျနော်တို့အရာအားလုံး၏စောင့်ရှောက်မှုယူ။ ဇ:ကျွမ်းကျင်သူများ၌လက်ထောက်လစ္စနှင့်ပေါ်တူဂီ။
ပြီးတော့ထုတ်ပြန်အချက်အလက်အသစ်အကြောင်းကိုကုမ္ပဏီတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အပေါ်တူဂီ၏တရားဝင်ဂျာနယ်ဖြစ်သည်။ ဖျော်ဖြေနိုင်ပါတယ်နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများ။ စတင်မီလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊အရေးကုမ္ပဏီရဲ့နာမည်ကိုအတည်ပြုအတွက်ဒေတာဘေ့စ၏သို့မဟုတ် ကို ။ ဤအဖွဲ့အစည်းပဳဆးေလက်မှတ်သို့မဟုတ် ၊ပြီးနောက်။ အတူတူရုံး အစများကိုလောလောဆယ်ကုမ္ပဏီမွတ္ပံု။ သင်ချင်စေခြင်းငှါစောင့်ရှောက်ခြင်းငှာအောက်ပါလိုအပ်ချက်များအတွက်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်သည်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ဂီအတွက်အကံ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အဆးေ။ အတည်ပြုပြီးတဲ့ဥပဒေအားဖြင့်အမျိုးသားမေးသည့်ကုမ္ပဏီနှင့်အနိုင်ယူတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုနှစ်ရက်အပေါ်မူတည်ပြီး၊အမျိုးအစားဆောင်းပါး၏။ အဖြစ်မကြာမီအဖြစ်ဆောင်းပါး၏အသင်းများ၏ကုမ္ပဏီများမှာလက်ခံခြင်းအားဖြင့်ဤအဖွဲ့အစည်း၊ကုမ္ပဏီတစ်ခုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်လက်မှတ်များမှတ်ပုံတင်ခြင်းလိုအပ်သောအရာများအတွက်အောက်ပါအဆင့်အတူ၊မှတ်ပုံတင်အတြက္သာျ၊လူမှုရေးနှင့်အပြီးများအတွက်လျှောက်ထားခြင်းအဘို့အကုမ္ပဏီတံဆိပ်ခတ်ထား။ ကျွန်တော်သတိပေးသောလူကြိုက်အများဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းပုံမှာနိုင်သည့်ထူထောင်နှင့်အတူတစ်နိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်၏ရိုေဒၚလာ ၅၊၀၀၀။ ဒါဟာအကြံပြုသည်ဖြစ်စေရန်အတည်ပြုဘို့အရွေးချယ်မည်နိုင်ရန်အတွက်မြင်လျှင်အခြားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောအမည်။ အဆိုပါခွင့်ပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေအတည်ပြုချက်၊ဤသဘောမျိုးအတွက်ကိုနှင့်အတူ တိကျသောပုံစံအားဖြင့်ထောက်ပံ့အဖွဲ့အစည်း။ ဒါ့အပြင်၊သငျသညျလိုပါလျှင်သိရန်အချက်အလက်အကြောင်းအထူးသဖြင့်ကုမ္ပဏီနှင့်သတင်းအချက်က၎င်း၏ရှယ်ယာ၊မြို့တော်အလှူငွေ၊အကျိုးအမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှု၊သင်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အတည်ပြုချက်တွင်ဤသဘောမျိုးနှင့်အတူသင့်မျှော်လင့်ပါကြောင်းအချက်အလက်ရရှိနိုင်အမျိုးအစားများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်များအတွက်သင့်လျော်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံ။ ကန့်သတ်ပေးရန်တာဝန်ကကုမ္ပဏီတွေ၊အများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများ၊အထွေထွေနှင့်ကန့်သတ်မိတ်ဖက်၊ဝါး အမျိုးအစားအဆောက်အဦနိုငျသောအားဖြင့်မှတ်ပုံတင်ထားသူလုပ်ငန်းရှင်ပြည်ပမှလိုသူချဲ့ထွင်ရန်မိမိတို့အ။ အသီးအသီးတည်ဆောက်သည်ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များ၊သို့သော်အများစုမှာကိစ္စရပ်များအတွက်၊အဆိုပါဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဟူဥရောပညွှန်ကြားချက်၊အပေါင်းအဒေသဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို။ မှတ်ပုံတင်ထားသောကုမ္ပဏီများမှာထားရှိကာအပေါ်တစ်ဦးရေတိမ်'အထိအသက်အရွယ်အထိတစ်ယောက်ယောက်ကအပေါ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဝယ်ယူ။ ဒီလိုမျိုးကုမ္ပဏီများထည့်သွင်းသို့နှင့်သူတို့သည်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်အမြန်ဆုံးအဖြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလွှဲပြောင်းထားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တိမ် ကုမ္ပဏီမရှိပေးရန်တာဝန်နှင့်အကြွေးတွေ၊ကအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်၊စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်လူပုဂ္ဂိုလ်များဝင်ရောက်ဖို့ဘဏ်ချေးငွေများဂီအတွက်ရှိမရှိ၊ကုမ္ပဏီများအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်သို့မဟုတ်တူညီကြရင်းနှီးမြှုပ်နှံအတွက်ကုမ္ပဏီ။ ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်သင်ပြောပြရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနှင့်ထွက်ရှာဖွေသတင်းအချက်လုပ်နိုင်ဘယ်လိုအကြောင်း၊အဆိုပါကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေအနေနဲ့အရေးထားသောဥပဒေများပါဝင်သည်ကြောင်းအချက်အလက်အမျိုးအစားများကုမ္ပဏီအဘို့အရရှိနိုင်တဲ့စီးပွားအတွက်တူဂီ၊လှုပ်ရှားမှုများကိုသူတို့ဖွံ့ဖြိုးနိုင်၊သတ်မှတ်ထားသောဥပဒေပြဌာန်းများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြည်ပမှ၊ပေါင်းသောအခြေအနေကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပံုတင်နိုင်သည်ဂီအတွက်။ အပေးအချက်အလက်အကြောင်းအရာများအသင်း၊ကုမ္ပဏီရဲ့အဓိကစာရွက်စာတမ်းများ၊အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်များကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ရှင်နှင့်လည်းအသေးစိတ်ဘယ်လိုအကြောင်းအဆိုပါကုမ္ပဏီဖျက်သိမ်းလုပ်ဂီအတွက်။ ထိုသို့သိရန်ကောင်းသောအဟူအလုပ်သမားကုဒ်ထို့ကြောင့်၊သင်စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများအတွက်အလုပ်အကိုင်စာချုပ်၊အခွင့်အရေး၊နှင့်တာဝန်ထမ်းများ၏ဒီနိုင်ငံအတွက်ဖြစ်စေ၊သူတို့ဒေသခံတွေဖြစ်ကြသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြား နိုင်ငံသားများ၊သဘောတူညီချက်အတွက်နှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊အမှုများစွာအတွက်အောင်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံအပေါ်ဆုံးဖြတ်အသင့်လျော်သောအမျိုးအစား၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၊သေဘာတူသူမ၏လှုပ်ရှားမှုများ။ မှတွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့လိပ်စာသင့်ရဲ့စုံစမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်ပင်ခံအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်သင်ကဖွင့်လှစ်ဖို့အများပြည်သူလက်လှမ်း၊အထူးသဖြင့်ပြီးနောက်သတင်းအချက်အလက်အပေါ်ကုမ္ပဏီကထုတ်ဝေတရားဝင်ဂျာနယ်သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်။ သူမည်သူမဆိုထွက်ရှာဖို့အသေးစိတ်အကြောင်းကိုအချို့သောအဖွဲ့အစည်းများတောင်းဆိုနိုင်ပါသည်ရှာဖို့အသေးစိတ်အတွက်လိုင်း၊သင် မှပူးတွဲ ၏ဒေသခံရှေ့နေများနှင့်နိုင်ငံတကာအကြံပေး။
ထိုသူအချို့၊ကဲ့သို့ကိုဖြစ် ႏó သို့မဟုတ်ထောင်သွေဖယ်ပြီအထူးကမ်းလှမ်းချက်များအတွက်နိုင်ငံခြားသားနှင့်ပင်ရှိသည်သာ။ ဒါပေမယ့်အပေါ်မူတည်ပြီးသင့်ဝင်ငွေခရက်ဒစ်ရမှတ်၊သင်တစ်ဦးရနိုင်ဖြစ်သင့်အပေါင်ခံအတွက်မည်သည့်ဘဏ်။ အိမ်ပြန်ချေးငွေများဘို့အချို့အထူးသဖြင့်မေးင္ငံျခားသားမ်ားအားပေးသူတို့ကိုစာရင်းတစ်ခုစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အပေါ်အခြေခံကြောင်းသူတို့အလုပ်သူတို့ရဲ့အကဲဖြတ်။ ဤသည်များမှာ:သင်ရချင်မှကမ်းလှမ်းကွဲပြားခြားနားသောဘဏ်များ။ ၎င်း၏ဦးဆောင်နှိုင်းယှဉ်ပလက်ဖောင်းဂီအတွက်ဤအမျိုးအတွက်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ကုန်များ။ ကျွန်တော်ကမတူဂီနိုင်ငံသားနှင့်ငါထဲမှာအသက်ရှင်နေထိုင်ကြပါဘူး။ အခါကျွန်မအတွက်ချေးငွေအဖွဲအတွက်လစ္စတယ်မှကမ်းလှမ်း
ကြောင်းအကြံပြုခံရကျေးဇူးပြုသူတစ်ဦးလျက်စေသည်မည်သည့်သတင်းမှားသို့မဟုတ်မမှန်သောဖော်ပြချက်သို့မဟုတ်ဖိုင်များကိုအမှားသို့မဟုတ်မမှန်သောအခွေကိုဥပဒေဘက်တော်သားအာဏာပိုင်ရာဇဝတ် တရားစွဲဆို။ တစ်ချိန်ကလက်ခံရရှိ၏တိုင်ကြားပြန်လည်သုံးသပ်လိမ့်မည်ေ။ ပါကထိုကိစ္စအတွက်ဖြစ်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြည်တွင်းသဘာဝတွင်ခရိုင်ရှေ့နေချုပ်ရုံး၏မအဖြစ်ဆောင်ရွက်သင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကရှေ့နေ။ ဒီတိုင်ကြားပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ရဲဌာနအရာရှိ၊အကြံပေးတဲ့သာအရေးပါကြောင်းရာဇဝတ်မှာသဘာဝလိမ့်မည်။ မူထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်၏ချိုးဖောက်မှုဌာန၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ခံစားခ်က္အသို့မဟုတ်ကျသွားသည်ပြည်တွင်းရေးကိစ္စနှင့်သင့်ရင်ခံဖို့အကြီးအကဲတွေအနေနဲ့တရားဝင်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြောင်းကနေ။ လည်း၊သင်ရွေးချယ်၊သင်နိုင်မည်အကြောင်းလိုက်ရန်အခွင့်အရေးယူ။ လျှင်သင်၏တိုင်ကြားချက်သည်ရာဇဝတ်မှုသဘောသဘာဝနှင့်ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ရဲဌာနအရာရှိများသင်ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှူးတွေအနေနဲ့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရာရှိမှစည်ပင်နှင့်အတူ၏တိုင်ကြား။ ကျေးဇူးပြုပြီးရှင်းပြ၏တိုင်ကြား။ ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားဘီ၊ဒါပေမယ့်သေချာပြောပြဖို့အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်သောအခါ၊ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်၊အဘယ်မှာရှိဒါဟာဖြစ်ပျက်။ င္သည္သက်သေထုတ်ပြန်ချက်များ၊အမည်များ၊အနံ။ ပူးတွဲမိတ္တူစာရွက်စာတမ်းများပံ့ပိုးပေးထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်စာချုပ်များ၊ အက္ခရာ၊လက်ခံဖြတ်ခြင်း၊ဖျက်သိမ်းစစ်ဆေးမှုများ(အရှေ့နှင့်အနောက်)၊ဓာတ်ပုံတွေ၊ဗွီဒီယိုသို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်စာတမ်းကြောင်းပြောပြ၏တိုင်ကြား။ တစ်ချိန်ကလက်ခံရရှိ၏တိုင်ကြားပြန်လည်သုံးသပ်လိမ့်မည်ေ။ ပါကထိုကိစ္စအတွက်ဖြစ်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြည်တွင်းသဘာဝတွင်ခရိုင်ရှေ့နေချုပ်ရုံး၏မအဖြစ်ဆောင်ရွက်သင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကရှေ့နေ။ ၁။ ငါသည်အသိအမှတ်ပြုသတင်းအချက်အလက် ငါ့အတွက်တိုင်ကြား၊အပါအဝင်ငါ၏အထောက်အထားနဲ့ဆိုအလက်ထုတ်ပြန်ချက်သို့မဟုတ်စွပ်စွဲချက်တွေမှန်ကန်ဖို့မှန်ကန်သောအကောင်းဆုံးငါ၏အသိပညာ၊အချက်အလက်နှင့်ယုံကြည်ချက်။ ၂။ ငါသက်သေငါရှိသောအခွင့်အာဏာအ ခရိုင်ခရိုင်ရှေ့နေရဲ့ရုံးကိုဆက်သွယ်ပါတီဆန့်ကျင်သောကျနော်ဖိုင်တွေစနဲ့၊ငါနောက်ထပ်အခွင့်အတီဆန့်ကျင်သောငါဖိုင်တွေတစ်ဦးတိုင်ကြားချက်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးအချက်အလက်များကိုဆက်စပ်ငါ့အခရိုင်ရှေ့နေချုပ်ရုံး၏။ ၃။ ငါသက်သေငါရှိသောအခွင့်အာဏာအ ခရိုင်ခရိုင်ရှေ့နေချုပ်ရုံး၏လက်လွှဲပြောင်းရန်ငါ၏တိုင်ကြားစာနှင့်မဆိုသို့မဟုတ်အားလုံးငါ၏ပူးတွဲ၍၊အခြား ဖက်ဒရယ်၊ပြည်နယ်ဒေသခံသို့မဟုတ်အခြားအေဂျင်စေခြင်းငှါရှိသည်ပိုင်ခွင့်ၾကာင္း။ ၄။ ငါနားလည်သူတစ်ဦးလျက်စေသည်မည်သည့်သတင်းမှားသို့မဟုတ်မမှန်သောဖော်ပြချက်သို့မဟုတ်ဖိုင်များကိုအမှားသို့မဟုတ်မမှန်သောအခွေကိုဥပဒေဘက်တော်သားအာဏာပိုင်မှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆို။
ႏကျွေးသည်ဥကၠဌဦး၏ဂီဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအဆင်းလှ။ မရှိပါ၊ဒါမှမဟုတ်ပင်တစ်ဦးစရိုက်ပုံစံ၊သုံးပြုခဲ့ဂီအတွက်အဖြစ်အခြားယန္တရားကတည်းကတိုင်းပြည်ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်၊ဒါပေမယ့်သာနှင့်အတူအလစ်ဘရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအ ၁၈၂၂ နှင့်အမွေး၏ပြင်သစ်တော်လှန်ရေးအတွေးအခေါ်ဘာသာရပ်အပေါ်အကြောင်းခုံသမာဓိအယူအပေါ်၎င်း၏"ခေတ်သစ်"ပုံစံအတွက်မြန်မာ။ ဒါတောင်မှပြီးတော့၊ပြည်တွင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း(အတွက်ပြဋ္ဌာန်း ၁၈၇၆)သိုခုံအောက်အရည္အခ်င္းပြည်နယ်တရားရုံး၊အဖြစ်ခဲ့ ၁၉၃၉နှင့်၁၉၆၁ ပြည်တွင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်း။ ပထမဦးဆုံးအလေးအနက်ကြိုးစားထိန်းညှိရန်ခုံမှာအသစ်နှင့်ပြည့်စုံညတ်တော်ရှိသည်မယ်လို့အထိစောင့်ဖို့ ၁၉၈၄:မိန့်တော်ဥပဒေအ ။ ၂၄၃၈၄၊ခုနစ်ဇူလိုင်လ ၁၉၈၄၊အရာနောက်ဆုံးမှာကြေငြာ မှုတစ်ခုအားဖြင့်ဂီလေ။ အတောအတွင်း၊သော်လည်း၊ဆႏၵျပခဲ့တည်ပြုအသစ်"ဆန္ဒအလျောက်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဥပဒေ"ဥပဒေအမှတ်။ သုံးဆယ်တ ၈၆၊နှစ်ဆယ်ကိုးဂုတ် ၁၉၈၆။ ဒီဥပဒေကြီးပြဋ္ဌာန်းေခုံဂီအတွက်အထိကိုုမတ်လ ၂၀၁၂။ အခါအတွက်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သောခဲ့သည် ၁၉၈၆၊ဒီခုံဥပေဒခဲ့ကျယ်ပြန့်အဖြစ်ရှုခေတ်မီဥပဒေ၊ဒါပေမယ့်မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းနှင့်နှောင်းပိုင်းသည်အထိ ၂၀၁၁၊ခုံသမာဓိယောနှင့်ရောနှောပညာရှင်ဖြစ်လာသည်အတော်လေးအဆိုရှင်လိုအပ်ချက်အကြောင်းကိုသိသိသာသာခုႏွစ္၏ပညတ်။.
ဗစ္ကီ၊နောက်ဆုံးနှစ်မှုခင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံမှာကျောင်းသားတက္ကသိုလ် အသုံးပြုသည် ရဲ့ထူးခြားတဲ့ရာဇဝတ်မှုမြင်ကွင်းတစ်ခုလံုးခ်င္းအိမ္စက်ရုံမှမိတ်ဆက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခင်းပုံရိပ်၊အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်၏မွတ္တမ္းအမြင်ကွင်းတစ်ခု၏။ အဆင်သင့်။ စေရဲ့ရှင်းလင်းတဲ့အလောင်းတစ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာမေးပွဲ၏သေအလောင်းတစ်အကြောင်းရင်းကိုဆုံးဖြတ်ရန်အသေခံ။ ရှိပါတယ်နှစ်ခုအမျိုးအစား:အားကစားနှင့်လက်တွေ့။ လက်တွေ့သူများအတွက်ဖျော်ဖြေသုတေသန၊လေ့ကျင့်ရေး၊ဒါမှမဟုတ်အသီး၏တောင်းဆိုချက်မှာပါ။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏မှုခင်းကျွမ်းကျင်သူများကအဆိုပါမှုခင်းစာမေးပွဲ၏ကလေးတစ်ဦးယုံကြည်ဖို့ရှိသေဆုံးမှု၏ပြင်းထန်ကြယ္ေဆးမ်ားသုံးလခံရပြီးနောက် နှင့်အတူ ။ ဒေါက်တာချစ်မြင်းသည်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်မှာမှုခင်းလက်လှမ်းနှင့်အကျော်ကြားမှုခင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်။ သူမအပေါ်မြင့်မားသောပရိုဖိုင်းမှုခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေး- အပါအဝင်လူသတ်မှု၏ဖင်လော-အဘယ်အရပ်များနှင့်ပတ်သက်ဓာတ်ခွဲခန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ်ကောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားမှယူအခင်းအကူညီပေးရန်သက်သေအထောက်အထားရိွပါတယ္။ သူမသည်ဖော်ပြ၏အမျိုးမျိုးသက်သေအထောက်အထားစုံစမ်းစစ်ဆေးအတွက်ဓာတ်ခွဲခန်းမှမျှင်မျှင်၊သွေးစွန်းအထင်းပုံစံများနှင့်ဓာတုပစ္စည်းဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ဘယ်လောက်ကရှင်းပြသည်ဓာတ်ခွဲခန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအပေါ်သက်သေအထောက်အထားအတွက်ကမ်းရိုးတန်းလမ်းလူသတ်မှုကူညီလုံခြုံစေရန်တစ်လေအ။ သတ္မွတ္ခံရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်နှင့်အတူမိမိတို့အဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာမေးပွဲရှိအများပြည်သူအပေါင်းတို့၏အကြောင်းတရားများ။ ။ ဂျူ အခင်း လေ့ကျင့်မှုခင်းဆေးပညာတွင်ဖရန်စစ္စနှင့် ခရိုင်၊ကယ်လီဖိုးနီးယား၊အဖြစ်ကောင်းစွာတစ်ဦးတွဲဖက်ပါမောက္ခအဖြစ်လက်တွေ့ပါမောက္ခဂါေမှာ ဆေးဘက်စင်တာ။ သူမအကြားခြားနားချက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာမေးပွဲနှင့်တစ်ပသည္ကြည့်မှာအချို့သောမှန်ကန်ကမ္ဘာ့အမှုပေါင်း။
အခါလိုင်းပျက်ကွက်များအတွက်ပေးဆောင်ဖို့ကုန်စည်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ပေး၊သင်လိုအပ်ရှာဖွေဖို့တစ်ဦးစုဆောင်းမှုအေဂျင်သို့မဟုတ်စုဆောင်းမှုဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီအတွက်ဘရာဇီး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုရှေ့နေခါကစားသို့ရောက်ရာဇီးဖောက်သည်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆပ်ဖို့ပျက်ကွက်အဖြစ်သင်သဘောတူ။ အမရဥပဒေကြမ်းအပေါ်ဖျက်ဆီးပါသညျနိုငျသင့်ရဲ့ဟန်ချက်ညီစာရွက်များ။ ဝန်ဆောင်မှု၏အရည်အချင်းပြည့်ကောက်ခံမှုရှေ့နေ ကူညီနိုင်ရန်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုယူခဲ့ဟုငွေသားစီးဆင်းပြန်သည်။ ကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်မှီခိုမှန်မှန်နဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောဝင်ငွေ၊အလျင်အမြန်ဆောင်ရွက်ပြီးပညာရှင်ပီသစွာအပြန်အကြွေးအကြွေး။ အဘယ်သူမျှမအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်မည်သူမဆိုသင့်အတူလွရဖို့ပေးဆောင်မဟုတ်များအတွက်ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများသင်ပေးပြီ။ ကျနော်တို့ရည်ရွယ်သေချာစေရန်မည်မဟုတ်။ ထိုလမ်း၊သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်လက်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘစုဆောင်းခြင်းရှေ့နေယုံကြည်အတွက်ယူရှိသမျှကိုခြေလှမ်းရရှိရန်ဖြစ်နိုင်သောအရာကိုသင်အကြွေး။ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်စုဆောင်းမှုအလေ့အကျင့်ကကျွန်တော်တို့ငယ္စဥ္ကအတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည်ပေါ်မူတည်ပြီးသင့်အခြေအနေ။ ရွေးချယ်စရာများ၏စုစည်းကြိုးပမ်းမှုအတွက်ဘရာဇီးပါဝင်သည်:ကျနော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်င့်အမှုဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့အကောင်းဆုံးသင်တန်းကိုယူမှ၊ဘာပဲသင့်ရဲ့ထူးခြားတဲ့အခြေအနေပေမည်။ ကတည်းကစုဆောင်းမှုအတွက်ဘရာဇီးအနိုင်အထက်ကွဲပြားခြားနားဖြစ်လိမ့်မည်စုအခြားနိုင်ငံများအတွက်၊ဒါကြောင့်အရေးကြီးသောအတွေ့အကြုံဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီရွေးချယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘကောက်ခံရှေ့နေကိုနားလည်စုဆောင်းမှုဥပဒေတွင်ဘရာဇီး။ သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံ အာမခံလိုအပ်သောအဆင့်များယူကြလိမ့်မည်နိုင်ရန်အတွက်စုဆောင်းမြင်စွာ။ ဘရာဇီးကောက်ခံရှေ့နေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီများမှာစုံဖတ္ရန္၊နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဟာဗျူဟာများဖြေရှင်းရန်ကြွေးမြီအငြင်းပွားမှုများအတွက်တရားမျှတပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့နည်းလမ်း။ အသိအမှတ်ပြုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်ကိုလုပ်ဆောင်ဖို့အလှည့်အခြားနည်းလမ်းများ၊ကျွန်တော်တို့၏ကုမ္ပဏီအစတစ်ခုအားကြီးသောသဘင်အတွက်ရာင္စာမ်က္ႏလျှင်တရားစွဲဆိုခြင်းဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူအပ်သည်။ အခါအကြွေးငွေအတွက်ဘရာဇီး၊အစာရှောင်အရေးယူအရေးကြီးသည်။ အမြီရှိသည်မဟုတ်စေခြင်းငှါအတွက်ရရှိနိုင်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအနာဂတ်အတွက်၊ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အလျင်အမြန်ဆောင်ရွက်ဖို့ထမြောက်ရာကိုသင်အကြွေး။ ပြင်းထန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုလည်းအရေးကြီးပါသည်၊နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူဇီးကောက်ခံရှေ့နေများယူလိမ့်မည်ရှိသမျှခြေလှမ်းရရှိနိုင်သောရ၏ရန်ပုံငွေထိန်းသိမ်းခြင်းနေစဉ်အစွမ်းကုန်ကျွမ်းကျင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေသည်၊ဖိုင်အတရားစွဲရ၊တင်သွင်း၊နှင့်အရေးယူအပေါ်ကောက်ခံသူများသည်တရားစီအတွက်ဘရာဇီး။ ကျွန်ုပ်တို့ကြွေးမြီပြုကြဘရာဇီးအတွက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ရရန်ခဲယဉ်းရလဒ်များကို။ တချိန်တည်းမှာ၊ကျွန်တော်သိသောကြွေးမြီစုဆောင်းခြင်းလို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၊တိုင်းတာချဉ်းကပ်မှုများ၊နှင့်ကျနော်တို့အလျှော့မပေးသင့်လုပ်ငန်းရဲ့နာမည်အတွက်ဘရာဇီး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၊သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဇီးကောက်ခံမှုရှေ့နေသင်လုံးဝယုံကြည်။ မအံ့သြဖွယ်အချို့ကိုကိုက်လွှဲမည်သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအတွက်ဘရာဇီးနှင့်သင်ပြောပြသူတို့နိုင်ခြင်းဂုဏ်သူတို့ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားများ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီပါဝင်သည်လိုင်စင်ရပုဂ္ဂလိကစုံစမ်းစစ်ဆေးများကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရာတစ်ခုကိုရှာဖွေဖို့ဖောက်သည်များနှင့်အတူခရက်ဒစ်အတွက်ဘရာဇီး။ မည်သည့်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ချဲ့ထွင်ရန်ရှာနေတဲ့ကမ္ဘာ့အထိရောက်ရှိမရှိ၊ဒါကြောင့်တိုက်ရိုက်အရောင်းအသို့မဟုတ်အဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များ၊ပညာရှိစေလိမ့်မယ်ရှာထွက်ဘရာဇီးရှေ့နေသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာဥပဒေရေးရာအကြံပေး။ အစုံဖတ်ရန်ဘရာဇီးရှေ့နေနှင့်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြစိုးရိမ်ပူပန်မှုကြောင့်မကြာသေးမၾကြျဘရာဇီးရဲ့'အင္တာနက္ဆက္ေ။ ပိုပြီးဖတ်ပါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်အလက်သီးသန့်မူဝါဒနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေပါပြီ။ ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်သင်ဖတ်ရှုဖို့အသစ်အဗားရှင်း။ ဘုံအကောက်ခွန်ထားမ်ား၏ဥရောပနိုင်ငံများသည်ကုန်ပစ္စည်းများအပြင်။ အထွေထွေအတွက်၊လုပ်ငန်းတာဝန်များအလွန်မြင့်မားနေကြသည်မဟုတ်၊အထူးသဖြင့်စက်မှုထုတ်ကုန်များ(၄။ နှစ်ခုပျမ်းမျှအားဖြင့်)။ အတွက်ကုန်ပစ္စည်းများအောက် ၁၊၀၀၀ ကီလိုဂရမ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုယူရိုေဒၚလာ ၁၊၀၀၀၊တစ်နှုတ်ဖြင့်ကြေညာလွှာတင်သွင်းခဲ့သည်နှင့်အတူအကောက်ခွန်များလုံလောက်သောများမှာ။ များအတွက်ပစ္စည်းများ၏တန်ဖိုး၊သင်ဖိုင်ကိုအောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများမှာအကောက်ခွန်ရုံးနှင့်အမှုကိစ္စ၏အများပေးပို့ဝယ်ယူအတွင်းဥရောပ၊အချိန်း၏သို့မဟုတ် ကြေညာရမည်ဖြစ်စေလွှတ်ရန်အကောက်ခွန်။ အဖြစ်၏အစိတ်အပိုင်း'ဘေးကင်းလုံခြုံ'စံချိန်စံညွှန်းမီနှစ်များအားကမ္ဘာ့အကောက်ခွန်အဖွဲ့၊ဥရောပသမဂ္ဂဖွင့်ထားတော်မူပြီအသစ်တစ်ခုစနစ်၏သွင်းကုန်ထိန်းချုပ်မှု၊ကို'သွင်းကုန်ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်'၊အရာရည်ရွယ်ချက်များကိုလုံလုံခြုံခြုံမှကုန်စည်များစီးဆင်းသည့်အချိန်တွင်သူတို့၏အမ်ိဳးအကောက်ခွန်နယ်မြေ၏။ ဒီထိန်းချုပ်မှုစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းကိုအသိုင်းအစီအကောက်ခွန်၊အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ကတည်းကဇန္နဝါရီ ၁၊၂၀၁၁။ ထိုကတည်းက၊အော်ရှောက်ရန်လိုအပ်သည်ကြိယာအကျဉ်းချုပ်တမ္းမှအကောက်ခွန်တိုင်းပြည်များ၏၊ကြိုတင်၏နိဒါန်းနှင့်အကောက်ခွန်နယ်မြေ၏။ အ အကောက်ခွန်(ပ်ိဳ) ဥရောပသမဂ္ဂရွင္းအမျိုးမျိုးသောလုပျထုံးလုပျကဲ့သို့:မိတ်ဆက်အလုပ္ရွားပတ်ဝန်းကျင်၊ရှင်းလင်းနှင့်ပိုပြီး။ အသေးစိတ်အချက်၊စစ်ဆေးအမွားမ်ား၏အကောက်ခွန်ဝက်ဘ်ဆိုက်။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအားလည်းဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်၏ပေါ်တူဂီ။
ဒါဟာအကြောင်းအဘယ်သူမျှမလျှို့ဝှက်ချက်ငှားရမ်းအတွက်ဘရာဇီးကစျေးပေါမဟုတ်ပါဘူး။ ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အတူကျန်းမာရေးအာမခံ၊အစားအစာများ၊သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊လှူမှလူမှုဖူလုံရေးဌာနနှင့်အခြားအခွန်ပေးဆောင်ဖို့အစိုးရကသိသိသာသာတိုးပွား၏ကုန်ကျစရိတ်အနေနဲ့ဝန်ထမ်းအတွက်ဘရာဇီး။ သည်အဘယ်သို့မပြောဖြစ်မကြာခဏကြောင့်မ အမြဲဤကဲ့သို့သော။ ဘရာဇီး၏အလုပ္သမားဥပေဒလူသိများအတွက်ဘရာဇီးအဖြစ် çã ဘူး သို့မဟုတ်ရိုးရိုး သည်အဓိကကျသဖြင့်ပုံမှန်အလုပ္သလှုပ်ရှားမှုများအတွက်။ ဒါဟာအတွက်ဖန်တီးခဲ့ ၁၉၄၃ နှင့်အတည်ပြုပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတ ú ။ ဘရာဇီးခခံဥပေဒထည့်သွင်းစဉ်းစားတစ်ဦးဝန်ထမ်းအဖြစ်မည်သည့်တစ်ဦးချင်းစီပေးအပ်န်ဆောင်မှုများအပေါ်မူတည်ပြီးလက်ခံတဲ့င့္အရန်အလုပ်ရှင်တစ်ဦးပုံမှန်အခြေခံပေါ်မှာ။ သည်ပေါ်တူဂီစကားန်ထမ်းများအတွက်အောက်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင် စည်းမျဉ်း။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်ဝန်ထမ်းအားလုံးရှိသတင်းအချက်အလက်ဝင်ရောက်အ သောအတိုအဘို့အႏအီး ê လူမှုရေး၊အဘယ်အခြေခံအလုပ်အကိုင်ဒေတာင့္အတူ၊အလုပ်ရှင်၊အလုပ်ဖော်ပြချက်နှင့်အခြားသူများမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ဒါဟာဖြစ်စဉ်းစားဖြစ်သည်အလုပ်အကိုင်အစီအစဉ်။ လုိုက်လုပ်သားများမှဆက်စပ်တစ်သမဝါယမ။ ပြီးတာနဲ့အလုပ်သမားတွေပူးပေါင်းသမဝါ၊သူတို့မစဉ်းစားခံရဖို့ ၊သမမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်တ္တ။ အရာတခုရှိတယ်သည်ဟုဆိုလိုသည် ကိုင်အစီအစဉ်တို့တွင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏သမဝါ၊ပင်သော်လည်းထိုသူတို့တွင်များစွာသောသူတို့ကိုအလုပ်ပိုလုပ်လို့အလုပ္သထက်အဖြစ်။ တစ်ဦးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-အလုပ်သမားတစ်ဦးချင်းစီသည်အလုပ်သမားတစ်ဦးအကြောင်းလုပ်ဆောင်ပြီးမိမိတို့အလုပ္အခြင့္အလမ္းမ်ားဘဲတစ်ဦးအလုပ်အကိုင်ဆက်စပ်အဖြစ်အလယ်အလတ်။ သတ်မှတ်တစ်ဦးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-အလုပ်သမားတစ်ဦးချင်းစီအဖြစ်ပုဂ္ဂလိကလူတစ်ဦးအကြောင်းထောက်ပံ့ဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဦးသို့မဟုတ်ပိုပြီးကုမ္ပဏီများ၊ရင်းကိုင်။ ဆိုလိုတာပါဝန်ဆောင်မှုပေးလျှက်သည်ရှားပါးလှသည်၊အဘယ်သူမျှမဖွဲ့စည်းထားသောငယ်အဘယ်သူမျှမလစဉ်လစာ။ အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအသုံးချတစ်ဦးချင်းစီထောက်ပံ့ဝန်ဆောင်မှုများသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အန္တရာယ်မရှိဘဲ၊ပုံသေအလုပ်လုပ်နာရီသို့မဟုတ်အငယ်၊အဘယ်သူမျှမအခွင့်အရေးပုံမှန်အစည်းအဝေးအကျိုးကျေးဇူးများ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ပေးဆောင်လပ်ရက်၊၁၃ လစာ၊အစားအစာသို့မဟုတ်ျဖစ္သည္။ တရားဝင်စကားပြောခြင်း၊ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်-အလုပ်လုပ်ကိုင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များထင်နေကြတယ်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ဖို့တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများ၊အဖြစ်သူတို့အကြွေးဆပ်ရန်မျှော်လင့်ကြသည်အခွန်နှင့်ဆက်စပ်သောန်ဆောင်မှုပေး၊သို့သော်အများဆုံးကိစ္စများတွင်၊သူတို့အလုပ်လုပ်အဖြစ်မျှအလွတ်အဖြစ်၊ဤလမ်းသူတို့ဖယ်ရှားပစ်ရ၏။ အဆိုပါအခေါ်အဝေါ် ဆရာဝန်ကိုရည်ညွှန်းသည်ကျောင်းသားများအတွက်မှတ်ပုံတင်ပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်အများပြည်သူပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း(အထက်တန်းကျောင်း၊နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်ပညာရေး)နှင့်ယူပြီးအချိန်ပိုင်းအလုပ်။ ဤကျောင်းသားများသည်သာအလုပ်လုပ်မှတက်ခြောက်နာရီတစ်နေ့လျှင်နှင့်သူတို့အလုပ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ရှိရမည်ဆက်စပ်သောအဆိုပါသင်တန်းကိုသူတို့ယူကြသည်။ အလုပ္သင္အလုပ်မလုပ်ပါဘူးအောက် အစိုးရ၊ဒါ၏ချွင်းချက်နှင့်အတူပေးဆောင်လပ်ရက်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊သူတို့ရှိသည်အခြားအခွင့်အရေး။ ကုန္သြယ္မႈစာခ်ဳပ္မ်ားအားမကြာခဏအကြားလက်မှတ်ရေးထိုးသည့်ကုမ္ပဏီများနှင့်တက္ကသိုလ်များသို့မဟုတ်ကျောင်းနှင့်အလုပ်စာချုပ်များလိုအပ်သည့်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးဆောင်ဖို့အခြေခံအကျဆုံးအသက်အာမခံများအသီးအသီးမိမိတို့အလုပ္သင္။ ပြည်တွင်းန်ထမ်းတို့အားပေးပည္တြင္းႏွင့္အျခားဝန္ေဆာင္မႈအားတစ်ခုချင်းစီသို့မဟုတ်အိမ်ထောင်။ အမှုအတွက်ဝန်ထမ်းအလုပ်လုပ်ပိုမိုထက်နှစ်ရက်တစ်ပါတ်၊အလုပ်ရှင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်အဖြစ်တရားဝင်န်ထမ်းများ၊အောက် စိုးရ၊ဒါမှမဟုတ်ရင်၊ပြည်တွင်းဝန်ထမ်းအဖြစ်ယူဆနိုင်စွာ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်သို့မဟုတ်အလွတ်။ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းငါတို့၏ဆောင်းပါးထဲမှာ"ဘုံအကျိုးခံစားခွင့်အတွက်ဘရာဇီး"ဘရာဇီးအလုပ္သသုံးပြုကြသည် အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အမှုများစွာအတွက်ဤအကျိုးခံစားခွင့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့တည်းခိုနှင့်အတူသင့်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အဘို့အရှာဖွေနေအခြားအလုပ်။ အရဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊အလုပ်လုပ်ကိုင်နာရီတွင်ဘရာဇီးထက်မပိုသင့်ပါလေးဆယ်လေးနာရီတစ်ပါတ်နှင့် ၊ရှစ်နာရီတစ်နေ့။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်ဝန်ထမ်းအလိုရှိသည်အလုပ်မှလေးနာရီအပေါ်စနေနေ့၊ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်အဘယ်အရာကိုအတွက်အများအပြားကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းအလုပ်လုပ်မယ်လို့အနေနဲ့အပိုလေးဆယ်ရှစ်မိနစ်နေ့တိုင်းနိုင်ရန်အတွက်ယူစနေနေ့။ မူတည်ပြီးအလုပ်အပေါ်များရှိပါသည်၊တစ်ခါတစ်ရံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအကြားကုမ္ပဏီနှင့်ဂၢမ်ား၊ပြီးတော့ဝန်ထမ်းအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ထက်ပိုရှစ်နာရီတစ်နေ့။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်သူနာပြုများ၊အစောင့်နှင့်အခြားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဘယ်သူ၏အလုပ်သည်လူ့အဖွဲ့အစည်း။ ပြည်နယ် ၊တည်ထောင်သောအလုပ်လုပ်ကိုင်နာရီမကျော်လွန်လေးဆယ်လေးနာရီတစ်ပါတ်နှင့်အချိန်မကျော်နှစ်နာရီတစ်နေ့အဖို့အဆန်းမဟုတ်ပါကြားအလုပ်လုပ်သောသူလူ ၁၀၊၁၂၊တဆယ်သို့မဟုတ်အတောင်တဆယ်နာရီတစ်ရက်။ ကြီးကြပ်မှုအရမ်းမတင်းကျပ်မှကြွလာသောအခါဤ နှင့်အချို့ကိစ္စများတွင်၊အလုပ်သမားရွေးချယ်လက်ခံရန်၊ထိုကဲ့သို့သောအလုပ်လုပ်ကိုင်အခြေအနေပြီးတော့တရားစွဲဆိုသောကုမ္ပဏီတစ်ချိန်ကသူတို့စွန့်ခွာ။ ဝန်ထမ်းတိုင်းအောက်တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင် စည်းမျဉ်းမှလက်ျာဘက်ရှိပါတယ် ၃၀ တစ်နေ့လျှင်ကြွင်းသောအရာအဘို့အတိုင်းတကျိပ်နှစ်ပါးလအတွင်း၏အလုပ်။ လျှင်ထိုအချိန်ကာလအားဖြင့်တစ်ဦးဝန်ထမ်းပယ်ချကြပြီမဟုတ်သိမ်းယူသူတို့ရဲ့အားလပ်ရက်၊ထိုအခါအလုပ်ရှင်ကပေးဆောင်ဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့တစ်သုံးအပိုစုစုပေါင်းအားလပ်ရက်။ ၁၃ လစာအလြန္ေညီတဲ့လင့္အနှင့်အခပေးအတွက်နှစ်ခုအရစ်ကျ။ ဘရာဇီးအတွက်၊ဒါကြောင့်အမှုအတွက်ပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလနှင့်ဒီဇင်ဘာလ။ ဒါဟာအညီအခရစ္စမတ်အပိုဆုနိုင်ငံတူနိုင်ငံများတွင်ဂျာမနီက၊အာဂျင်တီးနားနှင့်ပေါ်တူဂီ။ အဖြစ်ယခင်ကအတွက်ရှင်းပြကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါး"နှင်အတွက်ဘရာဇီး'၊လစဉ်လတိုင်း၊ရှစ်၏ဝန်ထမ်းရဲ့လစာကညွှန်ကြား ။ ကုမ္ပဏီများမှာလည်းတာဝန်ရှိစုဆောင်း အန္ထမ္းမ်ားလစာ။ ရာခိုင်နှုန်းပေးဆောင်ထမ်းများအနေဖြင့်ဝင်ရှစ်(သူတွေအတွက်မှတက်ဝင်ငွေ ၁။ ၁၀၆၊၉၀)ကိုတကျိပ်တပါးသော(အသောသူတို့အဘို့ဝင်ငွေမှ ၁။ ၁၀၆၊၉၁ အ ၃။ ၆၈၉၊၆၆)။ အဲဒီဝင်ငွေအဘယ်သူသည် ထက်ပို ၃။ ၆၈၉၊၆၆ လစာသတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေပမာဏ ၄၀၅၊၈၆။ ကျန်တဲ့ဟာဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်အလုပ်ရှင်။ é အမိန့်ကြော်ငြာစာအရမည်ဟုပေးထားသောနှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်အဆိုပါဝန်ထမ်းနှင့်အလုပ်ရှင်အခါထမ်းသည်။ ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာဖြစ်ရမည်ပေးထားသောတစ်လကြိုတင်ထုတ်ပယ်။ ဖြစ်ပျက်အဘယ်အရာကိုအတွက်အများအပြားကုမ္ပဏီများအလေ့အကျင့်လို့ခေါ် ၊အဓိပ္ပာယ်အဆိုပါကုမ္ပဏီင့်ကိုအလိုအစားပေးဆောင်ထမ်းတစ်ဦးအပိုဆောင်းအရက်သုံးဆယ်ပတ်လုံးအလုပ်ဘဲသူတို့အနေနဲ့ဝန်ထမ်းကဲ့သို့ဖြစ်အစားထက်သူတို့ကိုရှိခြင်းများအတွက်အလုပ်လုပ်ရက်သုံးဆယ်ပတ်လုံး၊သူတို့သတိပြုမိခံရဖို့သွားကြသည်။ ဒီအတိုင်းအတာသည်မွေးသောကြောင့်န်ထမ်းနေသောသတိထားမိကြလိမ့်မယ်ပစ်ခတ်တွင်းသုံးဆယ်ရက်အနိုင်အများအပြားပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေဘို့အကုမ္ပဏီနှင့်အပျက်သဘောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအျခားအလုပ်သမားများ။ ပညတ်တရားအားဖြင့်၊တစ်ဦးဝန်ထမ်းအကြောင်းဆာင္မ်ားေလည်းငွေကြေးအဆိုပါကုမ္ပဏီအတွက်သူတို့ရဲ့အားလပ်ရက်၊ဒါပေမဲ့ဒီမရှိသလောက်တရားစွဲဆိုခြင်းအားဖြင့်အလုပ်ရှင်။ ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံသောကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးယူ ၁၂၀ ရက်ပေါင်း။ ဒါ့အပြင်၊၏ချွင်းချက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်သောသူတို့အပေါ် စမ်းသပ်ကာလအတွင်း၊အကြားပစ်ခတ်ပြီးတာနဲ့ကိုယ်ဝန်ထုတ်ဖော်ထားပါတယ်နှင့်ငါးလအတွင်းအပြီးကလေးကိုမွေးဖွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဘတို့လည်းအခွင့်အရေးရှိယူမှငါးရက်ပိတ်သည့်အခါသူတို့သားသမီးမွေးဖွားကြတယ်။ ဘရာဇီးအလုပ်ရှင်များဖြစ်ကြသည်ဟူသောအဖုံး၎င်း၏န်ထမ်း'သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်များကိုတစ်ဦးန့်ညက်များအတွက်အလုပ်လုပ်သောသူတို့သည်ရှစ်နာရီတစ်နေ့။ သို့သော်၊ကိုယ့်ကြောင့်ဖြစ်ပျက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နာရီ၊ကြီးကြပ်မှုအရမ်းမထိရောက်နှင့်အများအပြားကုမ္ပဏီများမပူဇော်ကြပါမည်သည့်မုန့်ညက်အတွက်၎င်း၏န်ထမ်းများ၊နှင့်အချို့ကိစ္စများတွင်၊ပေးထားသောအာကာသအဘို့ထိုသူတို့ပြင်ဆင်ထားရန်အပူသူတို့ရဲ့အစားအစာသည်လွတ်လပ်။ ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့ဤဆောင်းပါး၌၊လွတ်လပ်ဖို့ချစ်ဆူးင်းတို့၏အလုပ်ရှင်များ။ ဒါဟာယဉ်ကျေးမှုအပြုအမူ၊စေတဲ့နည်းလမ်း"ကား"။ ဤအသတိပြုမိ၊အများအပြားကုမ္ပဏီများအဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်ရန်တရားမဝင်နှင့်ကြည့်ဖို့စောင့်ဆိုင်းလျှင်ထမ်းသွားသည်ဆူးပါပဲ။ အမှုများစွာအတွက်၊ဒီအလေ့အကျင့်တွေအများကြီးစျေးသက်သာထက်အောက်မှာအလုပ်လုပ်သင့်လျော်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ။ ဘရာဇီးဖြစ်ဟုဆိုသည်အဆိုပါနိုင်ငံ၏အမြင့်ဆုံးနံပါတ်အလုပ္သပဲ။ ၂၀၁၀ ဤသည်သုံးသန်းနီးပါးပဲ။ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများထောက်ပြတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ဤမျှလောက်များစွာသောရှိပါတယ်ရတဲ့အလုပ္သတောင်းဆိုမှုများအပေါ်သွားအတွက်ဘရာဇီးကဘရာဇီးဥပဒေခေတ်နှင့်အကာအကွယ်ဝန်ထမ်း။ ဒါ့အပြင်၊ဇီးစည်းမျဉ်းတွေဟာကျယ်ပြန့်ပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့အခက်အတူတက်စောင့်ရှောက်ဖို့အားလုံးလိုအပ်ချက်များကို။ အလုပ်ရှင်အရမ်းဂရုစိုက်ရမည်အကြောင်းသူတို့ပြုသောအမှုမူဝါဒသို့မဟုတ်န်ထမ်းချက်ရှာတွေ့ဖို့အကြောင်းပြချက်ဆူးသူတို့ကို(ကံဝင္း)။
သင့်ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်မကုန္ဆံုးခြောက်လအတွင်း၏လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲ။ လိမ့်မယ်လို့လျှင်၊သင်ကသက်တမ်းသင့်ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်းမပြုမီမည်သည့်ဇာ။ ယခုလစာအပိုအဖိုးအလျင်အသက်တမ်း၏အကူးလက်မှတ်။ ကြိမ်သွား ၄-၈ ပတ်ကြာမှ။ အားကၽြန္ဳပ္ထံေပးပုိသင့်ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်စာအုပ်မှခရီးသွားလာ။ အားလုံး၏အ လိုအပ်ရန်နေရာဇာသာသူတို့ကို။ အရောင်အာင္လက္မွတ္မူရင္းကိုေက်ာင္းသားထံကူးလက္မွတ္မွတ္ပံုစာမျက်နှာလိုအပ်သည်။ အားကၽြန္ဳပ္ထံေပးပုိနှစ်ဦးစလုံးအကူးလက်မှတ်စာအုပ်များနှင့်အပ်ာက္ပ်က္သြားျ။ ယခုအချိန်ဇယားမဆိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသွားခြောက်ဆယ်အတွင်းရက်ပေါင်းသင့်ရဲ့အတိုင္း။ ဒီခရီးသွားလာရန်ကနေဒါသို့မဟုတ်မက္ကဆီကိုနှင့်မည်သည့်ပးလ်က္ရိွဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပ။ ဤအချက်အားလုံးခရစ်ယာန်လို့ခေါ်တဲ့အစေခံရန်အတွက်မြန်မာအပါအဝင်တန်းစုံတွဲများတန်းအစ်မ။ ခရစ်ယာန်သာသနာပြုရမယ်အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်းလိုက်နာအဖြစ် ရေးသား။ အားလုံး၏အဖြေကိုအွန်လိုင်းဗီဇာလျှောက်လွှာအတွက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ လျှင်ခရစ်ယာန်သတိထားမိအွန်လိုင်းလျှောက်လွှာအထက်ကွဲပြားခြားနားဖြစ်လိမ့်မည်ကားအဘယ်သို့အပေါ်ပေးသောညွှန်ကြားချက်များ၊သူတို့မခေါ်သင့်ပါတယ်မင္က်ဥ္းခရီး ၈၀၀-၅၃၇-၃၅၃၇။ လျှင်ခရစ်ယာန်သာသနာပြုအတွေ့အကြုံကွန်ပျူတာပြဿနာများအတွက်လျှောက်လွှာကိုဖြည့်များ၊သူတို့ရိုးရိုးထွက်ပေါက်လက်ရှိအပလီကေးရှင်းဖွင့်ဖြစ်စဉ်ကို။ တစ်ချိန်ကလက်ခံရရှိတင်သွင်းနယ္လွ၊မေ့လျော့ကြပါဘူးကျေးဇူးပြုပြီးအဆိုပါဗီဇာေလွ်ာက္ထား။ ဒီအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတရပ်ကိုအောင်မြင်စွာဆုံး၏ဗီဇာလိုအပ်ချက်များကို။ အိနၵိလိုအပ်ကြောင်းခရစ်ယာန်သာသနာပြုမထားဓာတ်ပုံပေါ်မှာဓာတ်ပုံကို။ အဆိုပါဓာတ်ပုံအကွက်ကိုအဘယ်လူတစ်ဦးမှာအိနၵိရပ်ပုံပြီးနောက်မင္က်ဥ္းခရီးသွားလာပို့သူတို့ကိုအပလီကေးရှင်း။ အောင်ကျေးဇူးပြုပ်ာက္ပ်က္သြားျ၏ပထမဦးဆုံးစာမျက်နှာ၏အဗီဇာလျှောက်လွှာနှင့်အတူဓါတ္ပံုအတွက်ဘယ်ဘက်ထိပ်ထောင့်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းအပေါ်ဗီဇာညွှန်ကြားချက်စာရွက်။ သင်ဘယ်မှာနေထိုင်ပေါ်မူတည်ပြီး၊သင်စေခြင်းငှါအပ်ပေါ်လာဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွက် အတႏ။ ဘုရားခရီးသွားလာဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်လျှင်သင်ပြုပါရန်လိုအပ်သည်။ အသင်းတော်များအတွက်ပေးဆောင်လိမ့်မည်ဤအတူနေ့ ။ ယခုအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပေါ်ရရှိနိုင်သောနေ့ရက်နှင့်အချိန်အလုပ်၏ရက်ချိန်းမှသွားလာရန်အလီႏုိင္ငံ၊ရှိပါတယ်အဖြစ်ကန့်သတ်နေ့ရက်နှင့်အချိန်အခါသင်ပေါ်လာမှာလီႏုိင္ငံ။ ဘာသာစကားအသင်းမှာအမင္က်ဥ္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္လိမ့်မည်ကဲဖြတ်ခရစ်ယာန်သာ'အရည္အခ်င္းအတွက်ပေါ်တူဂီ။ ခရစ်ယာန်သာသနာပြုနိုင်ရန်သွားဂီမှီတိုငျအောငျဗီဇာသူတို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၌။ ဤသည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်သုံးဆယ်လေးဆယ်ငါးရက်တင်သွင်းခဲ့တဲ့ပြီးနောက်သင်သည်သင်၏ဗီဇာကိုအလီႏုိင္ငံ။ ခရစ်ယာန်သာသနာပြုမည်ရိုက်ထည့်ပါအတိုင္းအဖြစ်စီစဉ်ထား။ ပါကစာရွက်စာတမ်းများလှည့်အတွက်လွန်းနှောင်းပိုင်း၊သင်သည်တာဝန်ကိုယာယီမစ်ရှင်အတွက် ။။ အထိသင့်ရဲ့ဗီဇာလုပ်ငန်းများ၌လက်ခံရရှိ။ ယခုရည်ညွှန်း အားလုံးမေးခွန်းတွေဆေးဘက်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာဆရာဝန်။ သင်တို့သည်လည်းခေါ်အမင္က်ဥ္းဌာနမှာသူနာပြု(၈၀၁)-၂၄၀-၆၄၅၄ေ လိုအပ်ပါက။ သင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်သင့်ရဲ့ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်းများမှာ တိုင္းအနက်ထွက်သွားဖို့အတွက်ဆားအိုင်မြို့လေဆိပ်။
ဘရာဇီးအတွက်၊ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်လိုအပ်သည်ကိုမောင်းနှင်နိုင်ရန်အတွက်ကားများ၊ဘတ်စ်ကား၊ထရပ်ကားနှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်။ လက်ရှိ အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်ကဒ်အားလုံးအတွက်အမျိုးသားပိုင်နက်။ ဒါဟာယခင်ကဟုခေါ် ၊ဒါပေမယ့် ၂၀၀၈ ထိန္အဆိုပါစနစ်၊အလုပ်အားလုံးကားမောင်းသူရဲ့ပိုင်ရှင်မှပြန်လည်မှတ်ပုံတင်နိုင်တော့အုပ်စုဖွဲ့တွင် ။ ထိ ၂၀၀၈၊နှစ်ဆယ်နာရီအို အတန်းနှင့်တဆယ်ငါးနာရီလက်တွေ့သင်တန်းတွေလိုအပ်ခဲ့ကြရယူနိုင်ရန်အတွက်အ ။ သို့သော်၊ကနေ ၂၀၀၉ အပေါ်၊တစ်ဦးစုစုပေါင်း၏လေးဆယ်ငါးနာရီအသီအိုရီအတန်းအတွက်လိုအပ်သောအားလုံးအမျိုး၊ဤအသင်တန်းအခုဖုံးအုပ်ကိုယခင်ကစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဘာသာရပ်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ဘရာဇီးအသွားအလာဥပဒေ၊ခုခံကာကွယ်မောင်းနှင်မှုနှင့်ပထမဦးဆုံးအကူအညီ။ ပြီးတော့အတန်း၊ကျောင်းသားများကိုခံကြရသည် ၃၀-မေးခွန်းကိုစမ်းသပ်မှု၊နှင့်အတည်ပြုပေးလျှင်အနည်းဆုံးနှစ်ဆယ်တယောက်မှန်ကန်သောအဖြေ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊အနည်းဆုံးနှစ်ဆယ်ငါးနာရီလက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာယူရမည်အပေါင်းပိုပြီးလေးနာရီအညသင်ခန်းစာများ၊နှင့်ငါးနာရီသာကားအဆပ်ကပ်အားဖြင့်လိုက်ပါသွားကြသည်တစ်ဦးနည်းပြကနေအမှတ်မောင်းနှင်မှုကျောင်း။ အခါတစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်အပြောက်(အကောင်းအားဖြင့်အသွားအလာကိုယ်စားလှယ်များ၊ရဲတပ်ဖွဲ့သို့မဟုတ်အလိုအလျောက်စနစ်ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့အမြန်နှုန်းကင်မရာကို)ယာဉ်အသွားအလာချိုးဖောက်စည်းမျဉ်း၊၎င်း၏ပိုင်ရှင်ကအမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့်ပို့စ်အပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်၏ချိုးဖောက်မှု:အမျိုးအစားတည္ေနရာအပြစ်ဒဏ်ဒဏ်ငွေနှင့်အထောက်အထား၊ရရှိနိုင်သောလျှင်၊အတူဓါတ်ပုံတွေကိုခေါ်ဆောင်သွားခြင်းအားဖြင့်အမြန်နှုန်းကင်မရာ။ တဆယ်ငါးရက်အပြီးနောက် ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာကိုလက်ခံရရှိ၊အမှန်တကယ်လက်မှတ်ထုတ်ပေး။ အတွင်းဤတဆယ်ငါးရက်ပိုင်ရှင်တင်သွင်းနိုင်ပုံစံတစ်ခုအကြားအသွားအလာပါကအမတမာင္းကားကိုအခါအပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ဇလျက်သူ့အားပေါလုနှင့်ပေါလုရွာအသွားအလာဝတ္မႈ၊ဇလက်ခံရရှိလိမ့်မည်အမိန့်ကြော်ငြာစာ။ သူကတော့အပြည့်အဆိုပါပုံစံနှင့်အတူပေါလုရဲ့အချက်အလက်၊ပေါလုလက်မှတ်ထိုးပြီးတင်ပြရန်အသွားအလာအာဏာပိုင်အတွင်း၌တဆယ်ငါးရက်။ ထို့နောက်အားလုံးဒဏ်ငွေနှင့်အခြားပိတ်ဆို့မှုအတွက်ချိုးဖောက်လိမ့်မည်ထုတ်ပြန်ဖို့ပေါလုအစားဇ။ ယာဉ်အသွားအလာဖောက်ဘရာဇီးအတွက်ပြဿနာအချက်များကိုဆန့်ကျင်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်။ ခွဲခြားလေးခုအမျိုးအစား:'အသေးအဖွဲ(၃)၊'လတ်'(၄)၊'အနက်'(၅)နှင့်အလွန်အလေးအနက်'(၇)။ အဆိုပါအချက်များအတွက်ယာဉ်အသွားအလာကိုချိုးဖောက်ပြီးခဲ့သည့်တစ်နှစ်အစမှာအဆိုပါနေ့၏အပြစ်။ ရှိလျှင်မည်သည့်အချိန်တွင်စုစုပေါင်းရမှတ်ဖြတ်သန်းနှစ်ဆယ်မှတ်(ဆိုလိုတာပါပြီရရှိသောထက်ပိုနှစ်ဆယ်အမှတ်တစ်နှစ်အတွင်း)၊အဆိုပါလိုင်စင်အမည် ကိုဆိုင်းငံ့ထားဒေသခံအသွားအလာအာဏာအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်အဆိုပါမောင်းသူ၊အဘယ်သူသည်ဝင်နိုင်ပါသည်အကာကွယ်ရေးအတွင်းအနောက်ခြောက်ဆယ်ရက်ပတ်လုံး။ အတွက်ပြီးနောက်ခြောက်ရက်အတွင်းယာဉ်အသွားအလာအာဏာဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်အချိန်ဆိုင်း၊သောကကနေအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်အားနှစ်ဆယ်လေးလ။ ပြီးတာနဲ့ဆိုင်းကာလအတွင်းကြီးစွန်းနှင့်အကင္းဆုံးအနေနဲ့'ဆိုတော့ယာဉ်မောင်း သင်တန်းအဆိုင်းဆိုင်းသည်။ လည်းခေါ် ။ ပထမဦးဆုံးယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သည် ၁ နှစ်ခွင့်ပြု။ ဒါဟာအခြေခံအားဖြင့်အတူတူပင်အဖြစ်အပြည့်အဝ-စုံတဲ့လိုင္စင္၊ဒါပေမယ့်အချို့နှင့်အတူထည့်သွင်းစဉ်းစားနှင့်ပတ်သက်ဆန့်ကျင်ဘက်နှင့်ပြစ်ဒဏ်များ။ အဆိုပါခွင့်ပြုခြင်းခံရစေခြင်းငှါ(အစားသာမာန်)၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ကျူးလွန်မဆိုအလွန်အလေးအနက်'သို့မဟုတ်အနက်'၊သို့မဟုတ်နှစ်ခု'လတ်'ဆန့်ကျင်ဘက်။ အမှတ်စနစ်တူညီဖြစ်နေဆဲ။ အ ခွင့်ပြုခြင်းခံရခင္းကင္းရမည်အတစ်ခုလုံးကိုလုပ်ငန်းစဉ်ဆည်းပူးဖို့အသစ် ပါမစ္ေျမ။ အဘကားမောင်းလိုင်စင်သက်တမ်းသည်ရက်သုံးဆယ်ပတ်လုံးပြီးနောက်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲ။ ဆိုလိုတာကတဆဲမောင်းများအတွက်ရက်သုံးဆယ်ပတ် အသုံးပြုသက်တမ်းကုန်လိုင်စင်။ အဆိုပါယာဉ်မောင်းခွင့်မပြုဖို့နိမိတ်လက္ခဏာကိုတက်ဘို့ဤသင်တန်းများကိုမဆိုသူတို့ကျူးလွန်အလေးအနက်သို့မဟုတ်အလွန်အလေးအနက်သို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုအလတ်စားအပြစ်ထက်လျော့နည်းနှစ်မတိုင်မီသို့မဟုတ်ပါကမိမိတို့ ဆိုင်းငံ့ထား။ အဆိုပါဘရာဇီးသားယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးအနေဖြင့်စက္ကူအမ်ဳိးပလပ်စတစ်ကဒ်နှင့်အတူပ်စ်၊ပါဝင်သောအချက်အလက်အပေါ်။ ဒါဟာမျှော်လင့်သောအပြောင်းအလဲအပေါ်ကိုဖန်ဆင်းလိမ့်မည် ၁ လက ၂၀၁၉ ဆို၏ဆုံးဖြတ်ချက်အမျိုးသားယာဉ်အသွားအလာ။ သယံဇာတကိုလွယ်ကူချောမွေ့လိမ့်မယ်လို့အကြပ်နှင့်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်ဝန်ဆောင်မှုများ၏ပြဌာန်း:ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်လမ္းအသံုးျပဳသူမ်ားသေဆုံးငွေပေးချေမှု၊အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဇီဖော်ထုတ်အမြို့မြို့။ အသစ်မှတ်တမ်းတင်သင့်ပါတယ်တိုးမြှင့်ကြာရှည်ခံမှု၊လိမ်လည်ပြီးအထောက်အပေါင်းစည်းမှုနှင့်အတူအခြားနိုင်ငံများ။
ဒါကြောင့်၊သင်ဖြစ်နိုင်မယ့်ခံရဖို့သွားတက်ခူးဖို့တတ်နိုင်ဂီမီကိုအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲကိုကန်ချွတ်လာမယ့်လတစ်လအတွက်ရီယို။ ဒါပေမဲ့အဲဒီအနည်းငယ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီးလွယ်ကူတဲ့သင်ယူစကားသည်သင်မှထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်သင့်ရဲ့ဝေါဟာရခံစားနိုင်အောင်ပဲအပိုဘရာဇီး။ ရီယိုဒီဂ်ေရဲ့ပြောင်သည် ၊သို့မဟုတ်၊ကိုအံ့ဘွယ်မြို့။ ဖို့လွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ဟုပြော'စိတ်ကူး'။ ရလျှာကို-အချည်၊ အတိုနဲ့ပိုဆင်မာရ်နတ်။ ကိုယ့်စပိန်အတွက်၊လျှို့ဝှက်ချက်များမျက်နှာကိုဆိုလိုယခုဘရာဇီးအတွက်။ တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်ကထိုလွတ်လပ်တင္သူ သူတို့၏"'အပိုလို"ဇ၊အဆုံးသတ်ရေးနှင့်အတူပေါ့ပါးဖင္ထက်စပိန်ပီ။ 'ကျေးဇူးတင်ပါတယ်'ဘရာဇီးအတွက်အပြောင်းအလဲအပေါ်မူတည်၏။ လူတယောက်ကိုသင်ဆိုရင်၊သင်ပြော ၊ဆိုရင်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၊သင်ပြော ။ ဆိုလို'အေး'အတွက်ပေါ်တူဂီ၊ဘယ်လာတွေအများကြီးသောကြောင့်လွတ်လပ်စောင့်ရှောက်မှုတွေအများကြီးရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်စူပါအေးအချိုရည်။ မေးရန်အဘို့အသင်တစ်ဦးရေခဲ-အေးကာ၊(ဆက္ဖို)အစအဦးမှ၊အဖြစ်သာ: ၊လျှို့ဝှက်ချက်များ။ ('အနေနဲ့ရေခဲချမ်းအေးရေ၊ကျေးဇူးပြု။ ')ဒီစကားစုအဖွဲ့တစ်ဦးဖမ်းမိ-အားလုံးလွတ်လပ်သုံးနေ့တိုင်း။ မေးဖြစ်မေးခွန်းတစ်ခုက"အားလုံးအကောင်း။ သို့မဟုတ်"နေကောင်းလား။ ကပြောပါတယ်အဖြစ်ကြေညာချက်ကြောင့်ဘာသာပြန်ဆိုရန်"စိတ်မပူပါနှင့်။ ဒီအခွင့်အလမ်းများ"ဆိုပြီးဆင်ခြေဆင်ခင္ဗ်ာ။ စာသားအတိုင်း၊ဆိုလိုတာက၊"ပေး။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့နှင့်ရင်ပြောယဥ္ေက်းလျော့ပါးမည်ကိုမည်သည့်အပြန်အလှန်။ အလားတူ ၊ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်အဖြစ်မေးခွန်းတစ်ခုအဖြစ်သို့မဟုတ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုဆိုလိုတာပါ၊"အားလုံးအကောင်း။ ဘာကွဲပြားခြားနားကြောင်း ကစလာနှင့်အတူလက်သင်္ကေတ:တစ်ဦးလက်မပွင့်သောသင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်အသုံးပြုအားလုံးပတ်ပတ်လည်အဖြစ်ဘရာဇီး အဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်များ၏ချစ်ကြည်။ အဆိုပါအထင်ကပေါ်တူဂီစကားမကယ်လ်ဘာသာပြန်၊ ဖမ်းယူ၏အဓိပ္ပာယ်တော၊အရာတစ်ခုခုပျောက်ဆုံးနေဝန္မေက်၌ရှိသကဲ့သို့၊"ငါသည်ဤမျှလောက် အတွက်ရီယိုပြီးနောက်၊ငါ့ခရီး။ လွတ်လပ်ခဲ့ဖူးဘူးဟုခေါ် ၊ဤစကားများကိုဖမ်းယူ။ စာသားအဆိုလိုတယ်"နမ်းသောအခါနှင့်ဘယ်လိုလွတ်လပ်နှုတ်ဆက်အတွက်အီးမေးလ်သို့မဟုတ်ဖုန်းတွင်-တောင်မှလွတ်လပ်သင်သိမပြုစေခြင်းငှါအလွန်ကောင်းစွာ။ ကိုကာကိုလာကုမ္ပဏီ(:ကိုကိုကြီး)သည်စုစုပေါင်းအဖျော်ယမကာကုမ္ပဏီပူဇော်သက္ကာကျော်ငါးရာအမှတ်တံဆိပ်အတွက်ပိုထက်နှစ်ရာနိုင်ငံများနှင့်နယ်မြေ။ အပြင်ကုမ္ပဏီရဲ့အကာကိုလာအမှတ်တံဆိပ်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုုအချို့ကမ္ဘာရဲ့တန်ဖိုးအရှိဆုံးအဖျော်ယအမှတ်တံဆိပ်၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် ပဲပုပ်-အခြေခံအဖျော်ယမကာ၊ အစိမ်းရောင်လက်ဖက်ရည်၊ ရေ၊ အရည်နှင့်၊မုန်၊ဂျော်ဂျီကော်ဖီ၊ရွှေအထွတ်အထိပ်လက်ဖက်ရည်နှင့်ကော်ဖီ၊ရိုးသားလက်ဖက်ရည်၊အပြစ်မဲ့ နှင့်ဖျော်ရည်၊မိနစ်အပျိုရည်၊ အားကစားအချိုရည်၊ရိုးရှင်းစွာအဖျော်ရည်၊ရေ၊၊ဗီတာမင်ကိုရေနှင့် အုန်းသီးကိုရေ။ ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အစုစု၊မှလျှော့ချသကြားအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိုရည်ဆောင်ခဲ့မှအသစ်ဆန်းသစ်တဲ့ထုတ်ကုန်များကိုစျေးကွက်။ ကျွန်တော်တို့လည်းလျှော့ချဖို့အလုပ်လုပ်နေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုအားဖြင့်အသစ္လဲရမည္ျပန္လည္အ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူသွပ်မိတ်ဖက်၊ကျနော်တို့အလုပ်ခန့်ထက်ပို ၇၀၀၊၀၀၀ လူေတြ၊ကူညီဆောင်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကိုဒေသခံလူမှုအသိုင်းအကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း။
တယ်ဒီနေရာမှာဗီဒီယိုအသံဖိုင်ဒဏ်မှဘရာဇီး။ ဘာဒီလူတွေအပေါ်အပြင်းအထန်ရိုက်ကူးရက်စက်လူသတ်ဒါပေမယ့်ဟေး၊ကစောင့်ရှောက်ပြီးစီးတော့ဘာပဲ။ အချို့သောကောင်းတဲ့ရှာဖွေနေပြူးနေကြတယ် နှင့်အသုံးပြုသည့်အတွက်ဒဏ်။ ကြည့်လို့သူတို့အမှန်တကယ်သူတို့ကိုဂရုစိုက်မယ့်အစားအချို့၏အ တိပေးခြေထောက်သံုးေသေနတ်ကျနော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်အတွက်အသုံးပြုအတိတ်။ ကိုရှုတ်ချသောသူများထဲကရရှိသွားတဲ့အညွှန်းနှင့်အလုပ်ဖို့အတွက်အိပ် လမ္းသူသည်အဘယ်တော့ကြုံတွေ့နေရနှင့်အတူမလိုအပ်တဲ့ပမာဏ၏လည်။ နောက်ထပ်ရိုကျွန်တော်သိရှိလာနှင့်ချစ်ခြင်း၏ဤအရူးတာင္အမေရိကန်။ သူတို့ရဲ့ပြီးပြည့်စုံစွန့်ပစ်အဖြစ်ဒုတိယသာ။ သူတို့ကရရှိပါသည်အချို့သောတက်ဖမ်းရန်။ ကဲ့သို့ထင်ကောင်းတစ်ဦး တယ်ပြန်ပေးဆွဲခံပြီးမှပြန်လာမယ့်အ ၂ အတွက်လယ်ပြင်နှင့်စမ်းသပ်ဖို့အသုံးပြုအဆိုပါနောက်ဆုံးရဟာ့ဒ်ဝဲအဆိုးတယ်။ သူကကြည့်ပြီးသူယူရန်လိုအပ်သောအကြီးမားဆုံးန်၊လမ်းလျှောက်လေးလုံးအတော်များများနှင့်အားလုံး၊ဆင်းရဲသားလေး၊ယခုသူအမည်ရန်မလိုအပ်ပါဘူးဒါကြောင့်နောက်တဖန်အစဉ်အဆက်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကြောင်းအဆိုပါအချက်ကိုသူတို့ရုပ်ရှင်ဤပြသဘယ်လောက်မဲ့ဘရာဇီးသည္။ သူတို့ကျူးလွန်ဒီလူသတ်မှုနှင့်အတူတမ္းနှင့်ရုပ်ရှင်နှင့်ဘာမျှမဖြစ်ပျက်။ အင်း၊ဒီအကြောင်းစိတ်မ။ ကျနော်တို့တွေအများကြီးဆုံးရှုံးသွားဗီဒီယိုအခါကျွန်တော်တို့ပြောင်း။
ဘရာဇီး၊အပြည့်အဝတရားဝင်ဖွဲ့စည်းသောအ ၼဘရာဇီး၊အကြီးဆုံးတိုင်းပြည်အတွက် တောင်အမေရိကအားဖြင့်ဧရိယာနှင့်လူဦးရေနှင့်သာတူဂီစကားပြောတဲ့အတွက်။ ကြာပဉ္စမမြောက်နေရာတို့တွင်နိုင်ငံအတွက်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဧရိယာအားဖြင့်အဌမအရေအတွက်အားဖြင့်များ၏။ ဒါဟာအရှေ့ပိုင်းနှင့်အလယ်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများတိုက်။ မြို့တော်သည်မြို့၏။ နောက်ထပ်ဗားရှင်း၏အမည်မြို့သည်ဘရာဇီးကအတူတိုက်အမည်၏။ အကြီးမြတ်ဆုံးအရှည်ကနေမြောက်ဘက်အတောင် ၄၊၃၂၀ ကီလိုမီတာ၊နှင့်မှအနောက်ဘက်မှအရှေ့-၄၃၂၈ ကီလိုမီတာ။ ဒါဟာရှယ်ယာများနယ်အားလုံးနှင့်အတူအမေရိကန်တောင်ပိုင်းနိုင်ငံများမှလွဲချီလီနဲ့အီကွေဒေါ:ပြင်သစ်ဂီယာနာ၊ဂို၊ဂါဘွန်၊ဗင်နီဇွဲလား-ဘရာဇီးလ္၊ကို၊ပီရူးနှင့်ဘိုလီးဗီးယား-အနောက်ဘက်တွင်၊ပါရာဂွေးနှင့်အာဂျင်တီးနား-တောင်-အနောက်၊နှင့်ဂွေး-တောင်ဘက်တွင်။ အရှည်၏နိမိတ်အကြောင်းသည်တဆယ်ထောင်ကီလိုမီတာ။ ထိုသို့ဆေးကြောခြင်းအားဖြင့်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ၊အရှေ့နှင့်အရှည်စားက ၇။ လေးထောင်ကီလိုမီတာ။ ဖွဲ့စည်းမှု၏ဘရာဇီးလည်းပါဝင်သည်ပြား ၊အထူးသဖြင့် နန်ဒိုႏ၊၊စိန့်ပေတရုနှင့်စိန့်ပေါလုနှင့် နှင့် ။ ဘရာဇီးခဲ့၏ကိုလိုနီဂီကတည်းကလေယာဉ်ဆင်းသက်၏ ၏ကမ်းရိုးတန်းတွင်တောင်အမေရိကတိုက်၌၁၅၀၀ အထိဂျီအတွက် ၁၈၂၂၏ပုံစံအတွက်ဘရာဇီးအင်ပါယာ။ ဘရာဇီးဟာနိုင်ငံအတွက် ၁၈၈၉ ပေမယ့်၊အဖွဲ့တို့တွင်ဩဇာ၊အခုအခေါ်ပေသည်မှနောက်ကျောရက်စွဲပါ ၁၈၂၄ အခါပထမဦးဆုံးဖွဲ့စည်းပုံအတည်ပြုခဲ့သည်။ လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံသတ်မှတ်ဘရာဇီးအဖြစ် ၼသောပြည်ထောင်စုဖက်ဒရယ်ခရိုင်၊နှစ်ဆယ်-ခြောက်နယ်နှင့် ၅၅၆၄။ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေရဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်းဘရာဇီးအတွက်လိုအပ်သောကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မှအမှုဆောင်ဌာန။ ဒီအတွက်ကြောင့်၊နှင့်လည်းဖြစ်သောကြောင့်အချို့အခွန်ကိစ္စရပ်များအတြက္အဆိုပါနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ၊ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ပူဇော်၏မှတ်ပုံတင်ခွင့်ကုမ္ပဏီ(ကုမ္ပဏီခွဲကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အတွက်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်)ကိုစတင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဘရာဇီး။ နေသော်လည်းထိုအရေအမျိုးအစားများကုမ္ပဏီများအတွက်ထောက်ပံ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ဘရာဇီးပညတ်တရားအားဖြင့်၊အများဆုံးအသုံးများအမှတ်ပုံတင်ခြင်းအောက်ပါနေကြတယ်:ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေဖြစ်ပွားခဲ့သောကြောင့်အတွက်အထက်တွင်အစည်းနှင့်ဥပဒေရေးရာပုံစံများကိုရှယ်ယာမျှမယူဆတာဝန်ယူ၊ကလွဲကိစ္စများတွင်လိမ်လည်မှုသို့မဟုတ်ချိုးဖောက်၏။ ကုမ္ပဏီတွေကများသောအားဖြင့်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းအားဖြင့်ရှယ်ယာရှင်များတင်ဆောင်လာသောများအတွက်အထွက်လုံခြုံရေးအတွက်လှုပ်ရှားမှုအရင်းအနှီးဈေးကွက်၊သို့မဟုတ်တက်ပြင်ဆင်ခြင်းအထူးသဖြင့်လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်ရရှိမှုအကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်ကြောင်းအတွက်သာဤအမျိုးအစားကုမ္ပဏီ(ကျနော်။အီး၊ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာထည့်သွင်းပေါင်းစပ်ထားရမည်ဖြစ်ကုမ္ပဏီ အတွင်းနယ်မြေ၏အဘရာဇီးပိုင်ခွင့်)။ ကန့်သတ်ပေးရန်တာဝန်ကကုမ္ပဏီသည်အများဆုံးကျယ်ပြန့်အမျိုးအစားဥပဒေကြောင်းအရအဖွဲ့အစည်းဘရာဇီးအတွက်၊အဓိကအားကြောင့်နိမ့်နှင့်ဆက်စပ်ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အတူဤအမျိုးအစားကုမ္ပဏီနှင့်အနိမ့်ဆုံးအရေအတွက်ထုတ်ဖော်လိုအပ်ချက်များကို။ အဆိုအရဘရာဇီးဥပေဒ၊အဆိုပါကုမ္ပဏီရှိရမည်မှာအနည်းဆုံးနှစ်ဦးမိတ်ဖက်၊သူတို့အဖြစ်နိုင်ငံသားများ၏အဘသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားသားအဖြစ်တရားဝင်ပုဂ္ဂိုလ်။ အဆိုပါဥပေဒ၏ဘရာဇီးအရံအ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အချို့သောအမျိုးအစားများလှုပ်ရှားမှုများအားဖြင့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီရှိ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အရင်းအနှီး၊အရာသည်ခွဲတမ်း(အစုရှယ်ယာ)၏အကျိုးစီးပွားအသီးအသီးမိတ်ဖက်အတွက်စုစုပေါင်း၏မြို့တော်အဆိုပါကုမ္ပဏီ။ တစ်ဦးအုပ်ချုပ်အဖြစ်၊သာရှိပါတယ်တဦးတည်းလူတန်းစားများတမ်းအတွက်ဤအမျိုးအစားကုမ္ပဏီ။ ရန်လိုအပ်သည်သီးခြားစီအာရုံစိုက်ဖို့အခွန်ကောက်ခံခြင်းကုမ္ပဏီများအတွက်ဘရာဇီး။ တမ်းဖြင့်ထုတ်ကုမ္ပဏီအားဖြင့်ကိုယ်စားပြုလက်မှတ်များသို့မဟုတ်ငွေချေး။ သူတို့ကပုံသေ၏ပုံစံအတွက်မှတ်တမ်းတင်ဆင်ရန်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အရေအတွက်ကိုတမ်းထုတ်ပေးနှင့်အခပေးအတွက်ညာဉ်၏မြို့တော်အဆိုပါကုမ္ပဏီ။ အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ခဲ့သည်ထက္၊တည်ထောင်သူင့္ရွိတာဝန်ရှိသူများပမာဏနှင့်ညီမျှသောတန်ဖိုးအတမ်း(အစုရှယ်ယာ)အားဖြင့်ကျင်းပ။ ကတည်းကအားလုံးအတည်ထောင်သူဝံတူညီသောတာဝန်ဝတ္တရားနှင့်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်များ၊သူတို့အားလုံးရှိသည်ဖို့နိုင်စွမ်းင့်ကုမ္ပဏီ။ သို့သော်ငြားလည်း၊ညွှန်ကြားရေးမှူးများသောအားဖြင့်ခန့်အညာဉ်၊နိုင်သူဖြစ်ဖြစ်စေ၎င်း၏တည်ထောင်သူသို့မဟုတ်တတိယပုဂ္ဂိုလ်။ နှင့်အညီပညတ်တရား၏ဘရာဇီး၊ညွှန်ကြားရေးမှူးရကြလိမ့်မည် အနိုင်ငံသားသို့မဟုတ်နေထိုင်သူတစ်ဦး၏ပြောလိုပါတယ်။ ညွှန်ကြားရေးမှူးကတာဝန်မယူ။ သို့သော်၊ဒါရိုက်တာတင်နိုင်ပါစေရန်တာဝန်ရှိကုမ္ပဏီနှင့်တတိယပါတီများအတွက်အရေးယူဆောင်ထက်ကျော်လွန်ကြောင်း၎င်း၏အင်အားနှင့်သို့မဟုတ်ချိုးဖောက်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကိုင်ထားအစည်းအဝေး၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူမှာအနည်းဆုံးတစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်၊ပထမဦးဆုံးစဉ်အတွင်းလေးလမှအစအဦး၏အဘဏ္ဍာရေးနှစ်။ ဤသည်ပေးအပ်နိုင်ရန်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်အတည်ပြု:အောက်ကပဏာမစာရင်းများဖြစ်ကြောင်းစာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်သည်အားသက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်နှင့်အတူအမှတ်ပုံတင်ခြင်း၏ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခွင့်ပြုထား၊လိုင်စင်များ:အားလုံးနိုင်ငံခြားစာရွက်စာတမ်းများရမည်အတြက္အျ၊တရားဝင်အားဖြင့်မန်မစ်ရှင်၊အိနၵိသို့မဟုတ်သာဘရာဇီး။ ကိုလက်စွဲလည်းဖြစ်သို့ဘာသာပြန်ထားသောပေါ်တူဂီအားဖြင့် ဘာသာပြန်သူ၊ဒါပေမယ့်အဘာသာျပန္ခ်က္မတားမြစ်ရန်လည်းလုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ဖြေရှင်းရန်ပုဂ္ဂလိကဘာသာပြန်ပေမယ့်၊ထိုကဲ့သို့သောအမှု၌အချို့သောရှေ့ပေါ်လာနိုင်တယ်။ အောက်ပါအတည်ပြုချက်၏အဆိုပါကုမ္ပဏီရဲ့ ညဉ်အတွက်မှတ်ပုံတင်မီအရည်အချင်းပွားတုိက္ဆုိင္မႈဗျူရို၊အောက်ပါအဆင့်များနောက်တော်သို့လိုက်ရမည်ရရှိရန်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ပါမစ်များအတွက်ပုံမှန်လုပ်ငန်းများကိုကုမ္ပဏီများ၊ဥပဒေများနှင့်အညီအတွက်အင်အား၏ပိုင်နက်ထဲမှာအရင်ပိုင်ခွင့်:လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုရည်ညွှန်းရန်အထက်လိုအပ်သောကြောင့်အမှုပေါင်းအတွက်အခါအဆိုပါကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူအကူအညီနိုင်ငံခြားငွေကြေးအရင်းအမြစ်များ၊အသီးအသီးထိုကဲ့သို့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏င္ငံျခားရင္းရမည်ဖြစ်စနစ်တကျမှတ်ပုံတင်ထားသည့်အတွက်ဗဟိုဘဏ်၏ဘရာဇီးက၊နှင့်အတူရည်ရွယ်ထားဖို့ခွင့်ပြုသုံးစွဲငွေများ၊မြို့တော်ပန္၊ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်း၊စသည်တို့ကို။ ထိုကဲ့သို့သောမှတ်ပုံတင်ရေးထွက်ယူသွားတတ်အားဖြင့်ထိုအီလက်ထရောနစ်စနစ်ဟိုဘဏ်၏ဘရာဇီးက၊နှင့်သက်ဆိုင်ရာမှတ်ပုံတင်ရေးအရေ - လိမ့်မည်အားလုံးမှတ်တမ်းတင်နောက်ထပ်စစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူဆက်စပ်အသီးအသီးမိတ်ဖက်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီအတွက်။ ကျနော်တို့မှတ်ပုံတင်အဆင်သင့်လုပ်အတွက်ကုမ္ပဏီအသင်တို့အဘို့အတတ်နိုင်သမျှအတိုဆုံးအချိန်။ ဝယ်ယူကုမ္ပဏီအတွက်ဘရာဇီးလွယ်ကူခဲ့ဖူးခဲ့သည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ကုမ္ပဏီအတွက်အဘသည်အလွယ်ကူဆုံးနှင့်စျေးအသက်သာဆုံးနည်းလမ်းမှစတင်တရားဝင်နိုင်ငံတကာပွားရေးလှုပ်ရှားမှုများ။ ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ကုမ္ပဏီသည်အဓိကလမ်းညွန်များ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်။
ç နေမထွက်ဝင်းဒိုး၏သူ၏ဒုတိယ-ထပ္ရုံးမှာအပြာရောင်မိုးကောင်းကင်၊တစ်အံ့မခန်းအမြင်ရီယိုဒီဂ်ေရဲ့ ကမ်းခြေနှင့်ပို့ချ စီးပွားရေးအလားအတွက်တဦးတည်းထက်သူကျန်ရစ်ဂီအတွက်။ 'ဒါကြောင့်တစ်ဦးတော်တော်လေးစိတ်ပျက်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ အမှုအရာခက်ခဲတဲ့ျပာ ၊၂၇-နှစ်အရွယ်ဇာတိ သူသိမ်းထားပွားရေးအိပ်မက်ဆိုးသာေပၚတူဂီအတွက်၏တစ်ဦးအချပ်ကိုဘရာဇီးရဲ့အလုံးအရင်းနဲ့ဖွင့်တစ်ဦးဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီတွဲပြီးသူ့ရဲ့ဂျာမန်စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊အသက် ၃၇ နှစ်အရွယ်အန် ။ 'ဒီမှာစျေးကွက်အပေါ်ဖြစ်ပါသည် မီး၊အပြောအပြုံး ၊အဘယ်သူကုမ္ပဏီ၊၊တွင်စာင္းထက္အချို့၏အကျော်ကြားဆုံးကမ်းခြေမြေကြီးပေါ်မှာ။ 'အများကြီးရှိပါတယ်အခွင့်အလမ်းရှာဖွေရန်အလုပ်ရှာတွေ့မှဖောက်သည်များနှင့်စီမံကိန်း။ အစိတ်အပိုင်းများ၏ကြီးထွားလာသောလှိုင်းများ၏ပေါ်တူဂီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖြစ်ပွားမှအကြပ်အတည်းဘရာဇီးအတွက်၊ရှိရာစီးပွားရေးအပြင်း ၇။ ငါးခဲ့သည့်နှစ်၊အမြင့်ဆုံးနှုန်းထက်ပိုဆယ်စုနှစ်နှစ်ခု။ ဆန့်ကျင်ဘက်အခုနှစ်၊အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အေဂျင် ခန့်မှန်းထားပါတယ်ကြောင်းမြန်မာရဲ့စီးပွားကျုံ့မူမည်အားဖြင့်သုံးအတွက် ၂၀၁၂။ မဲ့က်န္တဲ့ ၁၂။ လေးခု-အမြင့်ဆုံးအဆင့် ၁၉၈၀ ခုနှစ်ကတည်းက။ အဆိုအရအစိုးရကိန်းဂဏန်းများ၊အရေအင္ငံျခားတရားဝင်နေထိုင်အတွက်ဘရာဇီးအထ ၁။ လေးဆယ်ခုနစ်သန်းဇွန်လအတွက်ပိုထက်ငါးဆယ်မှ ၉၆၁၊၈၇၇ ခဲ့သည့်ဒီဇင်ဘာလက။ ဦးဆောင်အတြင္းဖြစ်ကြောင်းဘရာဇီးရဲ့အ ၊ပေါ်တူဂီ။ နီးပါး ၃၃၀၊၀၀၀ အခုတော့ဘရာဇီးမှာနေထိုင်၊နဲ့နှိုင်းယှဉ် ၂၇၆၊ခုနစ်ရာ၌၂၀၁၀။ 'ဒီနှစ်၏အရေအတွက်ကိုပေါ်တူဂီလူမြင်လိုက်ရောက်ရှိခဲ့နှစ်ဆသို့မဟုတ်သုံးဆျပာ ။ ဘွဲ့ရတစ်ဦး၏တည်နေရာရဲ့ ကက်သလစ်တက္ကသိုလ်၊သူကအပြားအဟောင်းတန်းဖော်များရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်ဘရာဇီးနှင့်အန္ဂိုလာ၊အဘယ်မှာရှိသူ၏ဖခင်နှင့်ညီအစ်ကိုအခုလုပ်၊အခွင့်အလမ်းများ။ ဘရာဇီးရဲ့တရားမျှတမှုအတွင်းရေးမှူး၊ရွင္တစ္ဦး ã၊အမိန့်အသစ်ရောက်လာ-ထိုသူတို့တွင်များစွာသောသူတို့ကိုမြင့်မားသောလေ့ကျင့်သင်ကြားပညာရှင်များငတ်အခွင့်အလမ်းများအိမ်မှာ-ခဲ့ကြသည်။ 'ဘရာဇီးအစဉ်အလာလက်ခံရရှိနှင့်ဖြစ်ခြင်း၏အနေနဲ့ဖွင့်ပြီးလက်ခံပြည်သူကေျပာပါတယ္။ 'ထိုေကစားအလယ်ပိုင်းအခန်းကဏ္ဍအတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့သမိုင်း။ ပေါ်တူဂီနှင့်စပိန်နိုင်ငံသားများဦးဆောင်လမ်းကြောင်းသစ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကြောင့်၎င်းတို့၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းအနီးသည်ဘရာဇီးသူကေျပာပါတယ္။ ဟူဂို ç၊၃၅-နှစ်အရွယ် ဖွားစာရေးဆရာနှင့်သတင်းစာဆရာ၊ပြောင်းရွှေ့ဇီးမှစက်တင်ဘာလအတွက်ဆုံးရှုံးသွားပြီးနောက်သူ့အလုပ်သူအဖြစ်ခြင်းများအတွက်ဂီရဲ့သတင်းစာ။ သူပြောတဲ့ယဥ္ေက်းချိတ်ဆက်မှတဆင့်ဂီတ၊စာပေနှင့်ပင်ဆပ်ပြာအော်ပရာ။ 'ကျွန်တော်တို့နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အခွင့်အလမ်းများဖြစ်ခြင်းနှင့်အမှုအရာအကျင့်ကိုကျင့်၊သူကပြောပါတယ်။ 'ငါကောင်းတစ်ဦးကိုအလုပ်၊ရေးနေ့တိုင်းအဘို့အတ။ ငါအလစ္စနှင့် ရုတ်တရက်အားလုံးခဲ့သည်ပယ်ထား၊အဖြစ်၍လူများစွာအတွက်သတင်းစာ။ ငါမသွားနေဖို့ဂီအတွက်ကြောင့်ကျွန်မလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိသည်မဟုတ်၊ဒါကြောင့်ငါလာမှဘရာဇီး။ ပြီးတစ်လပြီးနောက်ကျွန်မဒီနေရာကိုလာဒါဟာအမှန်တကယ်ငါ့ကိုအကြောင်းငါလည်းသားကောင်များ၏အကျပ်အတည်း။ ç၊၏အစိတ်အပိုင်းမျိုးဆက်ထမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လာ၏ဒီမိုကေသာ ၁၉၇၄၊အဆိုဂီရဲ့ကင်းဂါတ်ရောက်ဖြစ်တဲ့စျေးအများအပြားမှသူ့ရွယ်။ 'ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးအခွင့်အလမ်းတွေကိုကျွန်မတို့ဟာပိုပြီးအခွင့်အလမ်းထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘခဲ့ပါ။ နှင့်ရုတ်တရက်အားလုံးမှာ ကြောင်းယူ၊သူကပြောပါတယ်။ 'အချို့သောအပြုအရာကိုအပေါ်တူဂီခဲ့တာရာစုနှစ်:သူတို့သှားကွ၏။ ရှိနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုကြီးမား၏လှိုင်းတံပိုးမှလူအဂီကိုဘရာဇီးအတိတ်အတွက်။ 'တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်ကထိုအခုတော့နေသောလူများမှလာဂီပညာတတ်ပြီ၊သူတို့ဝင္ပါ။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအကြပ်။ ဂီသာမဟုတ်သူများဆာ္ထားေကိုဘရာဇီး။ တစ်ဦးတိုးပွားလာအရေအနေဖြင့်နိုင်ငံသားအီတလီ၊ဗြိတိန်၊အမေရိကန်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံများမှာလည်းရောက်ရှိ၊သူတို့ကိုတို့တွင် အင်ဂျင်နီယာအမှုဆောင်များနှင့်ဗိသုလိုက်အခွင့်အလမ်းအတွက်အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ဘဏ္ဍာရေး၊ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့စက်မှုလုပ်ငန်း။ ကတည်းက ၂၀၁၀ ငလျင်၊ ကြရန်မိမိတို့အမြင်ကွင်းများအပေါ်တစ်ဦးအသက်တာသစ်အတွက်ဘရာဇီး၊အလုပ္အကိုင္မှဦးဆောင်ဖွင့်အတွက်အ ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၆ ရီယိုအိုလံ။ ရွင္တစ္ဦး éႏ၊နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ဘရာဇီးအမ်ိဳးသားလူဝင္မႈကာင္စီဟုနိုင်ငံရပ်ခြားကုမ္ပဏီတွေဟာပိုလှည့်သူတို့၏မြင်ကွင်းကိုဖို့ဘရာဇီးဖစ္ပါတယ္။ သူကထောက်ပြဖို့အတွက်မြင့်တက်အရေဆာက္လုပ္ခြင့္ရယီအလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမစ်အတွက်ဘရာဇီး၊၂၄၊၀၀၀၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်ပိုထက် ၅၆၊၀၀၀ေ၂၀၁၀။ 'အကျပ်အတည်းရည်ရွယ်ကြောင်းဥရောပကုမ္ပဏီများစတင်ဖော်ပြမိမိတို့စွမ်းအင်ကိုတိုးတက်မှုနှုန်းအဘို့အထဲသို့အခြားနိုင်ငံများ။ ဘရာဇီးခဲ့သည်ကိုမြင်လျှင်အများကြီးပိုကျန်းမာသန်စွမ်းကြီးထွားမှုကိုအောင်သောကုမ္ပဏီတွေဟာသားဒီနေရာမှာဖြည့်င်းတို့၏ရှေ့မှောက်တွင်နှင့်အသစ်ကုမ္ပဏီများရောက်ရှိရှာဖွေနေများအတွက်အသစ်အခွင့်အလမ်းသူကေျပာပါတယ္။ ဒါဟာမသာင္ငံျခားအဘို့ရှာသောသူ၏တစ်ဦးအချပ်ကိုဘရာဇီး၏စီးပွားရေး အလုံးအရင်းနဲ့။ အတရားမျှတမှုဆိုသည့္လွတ်လပ်ခဲ့သူလက်ဝဲများအတွက်အမေရိကန်၊ဥရောပသို့မဟုတ်ဂျပန်နိုင်ငံ၏ရှာဖွေရေးအတွက်သူတို့ရဲ့အနာဂါတ်ရင္း၊နောက်ကျောဆွဲခြင်းအားဖြင့်အကောင်းငွေကြေးနဲ့ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုလား။ 'ငါဒီမှာရှိနေတာကောင်းဘို့အ-အလာဘာ၊ဆို ç၊အဘယ်သူသည်သူ၏အရေးအသားတတိယဝတ္ထုမှအစတူဒီယိုတိုက်ခန်းအတွက် ။ ၊ရီယိုဒီဂ်ေ (နေစဉ်လစ္စလောင်၊ရီယိုဒီဂ်ေဘမ်းမီး)သည်သတ်မှတ်ကာလအတွင်းဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်းနှင့်အ၏ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြ၊တစ်ဦးပေါ်တူဂီယောက်ျားသည်သူ၊တိုက္တြန္းတတ္ၾနှင့်မဲ့၊အိမ်ပြန်ပေါ်စတင်ကြိုးပမ်းနေချိန်တွင်အမူလေနရာ -စတိုင်ပစ္မႈယ္ထြက္ျသာရီယိုနှင့်အတူသူ၏ဂီရည်းစား။ -အဘယ်သူ၏မိဘများ'မျိုးဆက်စွန့်ပစ်တူဂီအတွက်သူတို့ရဲ့ မှလွတ်မြောက်ရန်အ ရှင်-မိမိနှင့်တစ်ခေတ်တည်းပြေးကြမှတူညီသောမျိုး၏မကောင်းသောအ။ ကျနော်တို့သေးငယ်တဲ့အနည်းငယ်မျှမေးရန်။ လူများများဖတ်ပြီးထောက်ခံကျွန်ုပ်တို့၏လွတ်လပ်သော၊စုံစမ်းရင်ခံရင်ကထက်။ အများအပြားသတင်းအဖွဲ့အစည်း၊ကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်ချဉ်းကပ်မှုခွင့်ပြု ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာနယ်ဇင်းမှလက်လှမ်း၊မခွဲခြားဘဲသူတို့ဘယ်မှာနေထိုင်သို့မဟုတ်သူတို့သည်အဘယ်သို့တတ်နိုင်။ အထိန်းသူသည် လွတ်လပ်သောအနက်အဓိပ္ပာယ်၊ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းစာပညာကနေအခမဲ့ပွားဘက်နှင့်မအားဘီလျံနာလုပ်ငန်းရှင်၊နိုင်ငံရေးသမားသို့မဟုတ်ရှယ်ယာ။ အဘယ်သူမျှမတည်းဖြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အယ်ဒီတာ။ အဘယ်သူမျှမအခ်ိန္ပိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်။ ဤအရေးကြီးသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ပေးတဲ့အသံတွေမှလျော့နည်းကြား၊စိန်ခေါ်မှုကိုကောင်းတဲ့နှင့်သူတို့ကိုကိုင်ထားမှအကောင့်ကို။ ဒါဟာဘယ်အရာကိုအကြှနျုပျတို့ကွဲပြားခြားနားသောအဖို့ဤမျှလောက်များစွာသောအခြားသူများအတွက်မီဒီယာမှာအခါအချိန်အချက်အလက်၊ရိုးသားအစီရင်ခံသည်။ ခပ်သိမ်းသောအလှူကိုငါတို့ခံယူစာဖတ်သူများထံမှသင်တို့ကဲ့သို့၊ကြီးမားတဲ့သို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့၊သို့တိုက်ရိုက်ဝင်ရန်ပုံငွေကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းစာပညာ။ ဤထောက်ခံမှုနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အလုပ်လုပ်အဖြစ်ကြှနျုပျတို့ပွု-ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အထိန်းသိမ်းရန်ရပါမည်နှင့်တည်ဆောက်အပေါ်များအတွက်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလာ။ အထောက်အကူထိန်းသူထံမှအဖြစ်အနည်းငယ်သာအဖြစ်ဒေါ်လာတဦးတည်းနှင့်သာကြာမြင့်ကြောင့်တစ်ဦးမိနစ်။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ထောင်ပေါင်းများစွာကျန်ဥရောပဒီနှစ်အတွက်ရှာအလုပ်အကိုင်နှင့်တစ်ဦးထက်ပိုသောလူနေမှုပုံစံစတဲ့ဖြေလျော့ပေးခြင်းအ အဥရောပတိုက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဇမ်ဘစ်အတွက်ရှာဖွေရေး၏အလုပ်၊ဒါပေမယ့်အများအပြားရှိသည်စႏုိင္ပါထောင်သောင်းချီကို၊အိုင်ယာလန်၊ဂရိနှင့်ပေါ်တူဂီလူမျိုးထားခဲ့၏ရှာဖွေရေးအတွက်အသစ်အသက်အဖြစ်ယူရိုဇုန်ရဲ့ဒုက္ခဆိုးဝါး
ကျနော်တို့အယူအစွမ်းကုန်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်သေချာအောင်လုပ်ကြပြီမဟုတ်မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်အပေါ်မည်သည့်ပစ္စည်း။ သို့သော်၊ဒါကြောင့်အလားအလာကောင်းကြောင်းဖြစ်ပျက်အကြောင်း၊ကျနော်တို့ခဲ့ကြ က၏အရင်းအမြစ်တစ်ခု ပုံရိပ်၊သို့မဟုတ်အဲဒီပုံတွေကိုရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည်ပြီးအောက်မှာအမှား။ အကယ္ရှာတွေ့ထိုကဲ့သို့သောပုံနှင့်ပိုင်ဆိုင်မူပိုင်ခွင့်၊ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်၊နှင့်ဖြစ်စေလိုရှိသည်ဖို့ရုပ်ပုံဖယ်ရှား၊ဒါမှမဟုတ်သင်အသိအမှတ်အဖြစ်မူပိုင်ခွင့်ရရှိထားသူ။ ခွင့်ပြုပါကျေးဇူးပြုပြီးသုံးစွဲဖို့ရက်အနည်းငယ်ဖြစ်စဉ်အပြောင်းအလဲ။ ကျွန်တော်တို့လုပ်မှာခြွင်းချက်တစ်ခုသောရုပ်တုဆင်းတုကိုအသုံးပြုကြသည်သောအတွက်ငါတို့၏အင်္ဂါအကြောင်းအတိတ်နှင့်အနာဂတ်ကွင်း။ အဖြစ်အဘယ်သူမျှမလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရရှိနိုင်ပါသည်ပုံရိပ်တွေဝယ်ယူနိုင်ပါသည်၊ကျနော်တို့ခွင့်ပြုမိမိကိုယ်ကိုမိမိအတရားမျှတတဲ့အသုံးပြုမှုများ၏စုံတွဲတစ်တွဲ၏ထိုကဲ့သို့သောပုံရိပ်တွေအဘို့အများပြည်သူအချက်အလက်။ ကျနော်တို့သို့သော်အစဉ်အမြဲအကြွေးအဖွဲ့အစည်း။ ဖြစ်ရပ်အတွက်ရုပ်တုဆင်းတုများ၏အတိတ်ကွင်းဤမူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်အားမကြာခဏအလွန်ခက်ခဲသိရှိနိုင်ဖို့၊ဒါကြောင့်ယခုကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြားလျှင်မည်သည့်ခရက်ဒစ်တွေဟာမမှန်ကန်ပါ။ နောက်ထပ်မှတ်သားကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အဘယ်သူမျှမလမ်းအတွက်တုံ့ပြန်ရန်မည်သည့်တောင်းဆိုချက်အတွက်အခကြေးငွေသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏ရလဒ်အဖြစ်၏ချိုးဖောက်မှုမူပိုင်ခွင့်သို့သော်ခြိမ်းခြောက်စာတစ်စောင်သင့်ရဲ့ရှေ့နေများရှိစေခြင်းငှါေရးသားခဲ့သည္။ လည်း၊သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ပုံရိပ်တစ်ခုယခင်ကထုတ်ဝေအောက်တွင်မျှဝေခြင်း လိုင်စင်၊ဒါပေမယ့်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဤလိုင်စင်၊သို့မဟုတ်သင်ဆန္ဒရှိလျှင်သင်ရှိသည်ခရက်ဒစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်၊သို့မဟုတ်ပင်ဖျက်ဖို့အခမဲ့ခံစားရကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ၊ကျနော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်၏တောင်းဆိုချက်အညီ။ ဘွန်ကွင်း ကွင်းလာလီဂါကွင်းအဖွဲ့ချုပ်တကွင်းယားလိဂ်ကွင်းရီးကွင်းနာက္ထပ္ ကွင်း ဂျင်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲလမ်းညွှန်လန်ဒန်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲလမ်းညွှန်မက္ကစီကိုစီးတီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲလမ်းညွှန် ဒေသဘောလုံးပြိုင်ပွဲလမ်းညွှန်ဥရောပရဲ့အကြီးဆုံးဘောလုံးကွင်းချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲကွင်းယူရိုပါလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲကွင်းကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲကွင်းယူရိုဗိုလ်လုပွဲကွင်း
ဤအပိုင်းကိုအရန်ရည်ရွယ်ပေးသုံးဝင်ပြီး၊အဖြစ်ဝေးတတ်နိုင်သမျှ၊အထိနေ့စွဲသတင်းအချက်အပေါ်အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူလုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်ချက်များအတွက်မြန်မာ။ အောက်ပါအဆင့်တွေကိုလမ်းညွှန်ဖို့ဘာတွေဖြစ်ပျက်ပြီးနောက်သင်သဘောတူတဲ့အတြက္ေစ်းႏႈန္း ၏အိမ်ရာသစ်:ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်သင်ပြီးသားအရွေးအလြတ္ေ၊ဤအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ရပျအများအားဖြင့်ပတ်လည်မှာတာဝန်ခံတဦး ဝယ်ယူစျေးနှုန်းအဘို့အသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှု။ အများအပြားဝယ်လက်ျပးလြတ္ေလက်မှတ်ရေးထိုး၏တန်ခိုးတော်ကိုရှေ့နေ çã နှင့်အတူတိကျသောအင်အားဖြည့်အပေါ်မိမိတို့အကိုယ်။ ဒီကိုအလွယ်တကူပြုသောအမှုအတွက်တစ်စာချုပ်စာတမ်းရဲ့ရုံးနှင့်အကြံပြုသည်ရှိသည်မပြုလျှင်ထိုအချိန်မှနိမိတ်လက္ခဏာနှင့်အတူကိုင်တွယ်ကိုဗြူရို၏အစိတ်အပိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်လူတစ်ဦး။ ဝယ်သူရဲ့လြတ္ေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏အားလုံးစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်ဆွဲယူတက်စာခ်ဳပ္ ႏႏ အီး ။ အ စာချုပ်ကိုဖော်ပြထားခံေျမ၊ဖေါ်ပြပိုင်ရှင်နှင့်ဝယ်လက်၊ဖေါ်ပြပါစည်းကမ်းချက်များ၏ဝယ်ယူနှင့်အချိန်သတ်မှတ်ချိန်ပြီးစီးများအတွက်ရောင်းချခြင်း(များသောအားဖြင့်ခြောက်လအတွင်း)။ ဝယ်သူနှင့်ရောင်းချသူ(သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်)အမှတ်လက္ခဏာကို စာခ်ဳပ္(များသောအားဖြင့်အများ၏ရှေ့မှောက်၌တစ်စာချုပ်စာတမ်း)နှင့်ဤအချိန်တွင်ဝယ်သူငွေပေးချေအသိုက်မှအရောင်းချသူ။ ဒီအပုံမှန်အားဖြင့်ဆယ်။ လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက်၊အောက်တွင်ပေါ်တူဂီဥပေဒအဝယ်ကနေဆုတ်ခွာဝယ်ယူသူတို့ကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုအသိုက်သူတို့ပေးဆောင်ခဲ့ကြ။ ဒါကြောင့်အရာင္းခ် လုိက္ျထဲကကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတော့ရောင်းသူဆပ်ဖို့ရှိပါတယ်နှစ်ဆသောငွေပမာဏကိုများ၏အသိုက်မှဝယ်။ တစ်ချိန်ကအ စာချုပ်များတော့ဝယ်သူနှင့်ရောင်းချသူ(သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်)ပြန်တွေ့တစ်ခုခု၏ရှေ့မှောက်၌တစ်စာချုပ်စာတမ်းမှာသို့မဟုတ်$ေႏအီး အရာနောက်ဆုံးလုပ်ရပ်၏ရာင္းရန္ရွိသည္။ ဝယ်ပေးသောရန်ပုံငွေကျန်ရှိနေသေးသောငွေပမာဏဖို့ရောင်းသူနှင့်ရောင်းသူကျော်တို့သည်လက်ကိုအသော့။ အမ်ိဳးအခါတွင်မှတ်ပုံတင်အမည်ပိုင်ရှင်သစ်များ၏နှင့်အတူပြည်နှင့်သဖြစ်စဉ်ပြည့်စုံ။ အောက်ပါကုန်ကျစရိတ်ဝယ်အားဖြင့်ပေးဆောင်အပေါ်ဝယ်ယူ၏။ အဆိုပါကုန်ကျစရိတ်များအပေါ်မှာမူတည်ပြီးကွဲပြားခြားနားသောဝယ်ယူမှုစျေးနှုန်းနှင့်အမျိုးအစား၏၊ထိုအမူလစာမျက်နှာသင့်ရဲ့မူလတန်းသို့မဟုတ်အလယ်တန်းနေအိမ်သို့အတွက်မြန်မာ။ အဆိုပါပြောင်းရွှေ့ကြေးအခွန်အပေါ်အခြေခံသည်ဝယ်ယူစျေးနှုန်းသို့မဟုတ် တန်ဖိုး(စိတန်ဖိုး)အခံေျမ၊ကိုမဆိုဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့တွက်ချက်အသုံးပြုပြီးအောက်ပါနှုန်းထားများနှင့်ပေးဆောင်ရမည့်အချိန်တွင်ဒေသခံအခွန်ရုံး ဘဏ္ဍာရေးသို့မဟုတ် ရုံးခင်နောက်ဆုံးလုပ်ရပ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများဥပမာအားဖြင့်၊အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူများအတွက် ၁၅၀၊၀၀၀ ပေးဆောင်မယ်လို့ ၁၊၈၅၉။ နှစ်ဆယ်ခုနစ်သာၸံ။ (၁၅၀၀၀၀ ႏွင့္ငါး ၅၆၄၀။ နှစ်ဆယ်သုံး ၁၈၅၉။ ၂၇)၀။ ရှစ်ဝယ်ယူစျေးနှုန်း၏၊ပေးဆောင်ရမည့်အချိန်တွင်ဒေသခံအခွန်ရုံးဘဏ္ဍာရေးသို့မဟုတ် မတိုင်မီနောက်ဆုံးလုပ်ရပ်၏ရာင္းရန္ရွိသည္။ ဝယ်ယူရန်အတွက်အိမ်ခြံမြေဂီရှိမရှိ၊တစ်ဦးအဖြစ်နေထိုင်မ၊သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ဂီခွန်(ဘဏ္ဍာရေး)ရေ ႏထောက်အကူရယူနိုငျသော၊မှာဒေသခံအခွန်ရုံးဘဏ္ဍာရေးသင်စောင့်နေစဉ်။ သငျသညျပေးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အထောက်အထားများသင့်ရဲ့အထောက်အထားအဖြစ်အထောက်အထားများအဘို့အလျှောက်ထားရန်။ ဤအဆောင်အရေအတွက်လည်းလိုအပ်ဖွင့်လှစ်ဖို့တစ်ဘဏ်အကောင့်နှင့်ဆက်သွယ်ထားသောရေ၊လျှပ်စစ်မီး၊တယ်လီဖုန်း၊စသည်တို့ကို။ သင့်ရဲ့လြတ္ေသို့မဟုတ်ရှေ့နေလိမ့်မည်ကြောင်းစစ်ဆေးအမ်ိဳးသားမွတ္ပုံနိုင်ရန်အတွက်မီရန်သင့်အားအကြံပေးနှင့်အတူဆက်လက်ဆောင်ရွက်။ ဝယ်ယူပြီးနောက်စာရွက်စာတမ်းများည့်နှင့်အတူသင့်ရဲ့အချက်အလက်။ သင့်ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်အစာရင်းများ၏ဖော်ပြချက်ခံေျမ လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများအတွက်အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်းသူရဲ့လမ်းညွှန်။ ဤအချက်အလက်ပေးအပ်သည်လမ်းညွှန်အဖြစ်ဖောက်သည်မှအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာ၏အသန္တာမှန်ကန်သောအချိန်၏အရေးအသား။ဥပေဒဂီအတွက်အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲ-အကြံပြုလိုတယ်စစျဆေးဖို့သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအခြေအနေနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်။.
တစ်ဦးကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးငွေကြေးထောက်ပံ့နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ထုတ်ကုန်များမှအကြွေးမှဘဏ္ဍာရေးသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုငှားရမ်းအဖြစ်ကျယ်ပြန့်အစည်းများ၏ငှါးသောသူနှင့်မာ္ေတာ္ကားအာမခံ၊ ဂီနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်အပေါင်းတို့အားတုံ့ပြန်ရန်ဖောက်သည်အပိုင်းသည်၎င်း၏ကမ်းလှမ်းမှုကိုမှသူတို့၏လိုအပ်ချက်များကို။ အတူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏အလေးဘဏ္ဍာရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ ဂီကိုထိန်းသိမ်းမြဲတမ်းဆက်သွယ်နှင့်အတူအမှတ်တံဆိပ်နဲ့ဖြန့်ဖြူးဖို့ကြိုး၎င်း၏ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေးနှင့်အတွေ့အကြုံရဲ့အကျိုးအတွက်ဖောက်သည်ကျေနပ်မှု။ ၂၀၁၈: ဘဏ်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပို့စ်များ၎င်း၏အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အစဉ်အမြဲအသစ်နှင့်အတူ ၂၀။ ကိုးဘီလီယံနှင့်အကြို-အခွန်ဝင်ငွေ၏၁၊၂၁၅ သန်း
ဘရာဇီး-မြန်မာဆက်ဆံရေးရှိသည်ရှင်ကျော်လေးရာစုနှစ်အစမှာ ၁၅၃၂ နှင့်အတူတည်ထောင်ခြင်း၏၊ပထမဦးဆုံးပေါ်တူဂီအမြဲတမ်းအခြေချအတွက်အမေရိကတိုက်၊အထိအပြင်။ နိုင်ငံနှစ်ခုအကြားကြသည်က်ိုချည်ထားသောကြောင့်ပေါ်တူဂီအင်ပါယာ။ သူတို့အဖို့ဆက်လက်အားဖြင့်ချည်နှောင်လျက်ခံရတဲ့ဘုံဘာသာစကားနှင့်ဘိုးဘွားလိုင်းများအတွက်ပေါ်တူဂီလွတ်လပ်သောကာင္တြင္ချီ၏အနှစ်။ ယနေ့အချိန်တွင်၊ဘရာဇီးနှင့်ပေါ်တူဂီမျှဝေခွင့်ထူးခံဆက်ဆံရေး၊သာညိွေင္ငံေရးရေးနှင့်သံတမန်များညှိနှိုင်းခြင်း၊အဖြစ်စီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊ယဉ်ကျေးမှု၊ဥပဒေရေးရာ၊နည်းပညာနှင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာပူးပေါင်း။ ဆို ကို ၂၀၁၁ ဘီဘီစီ၊၇၆၏ပေါ်တူဂီလူမြင်ကွင်းကိုဘရာဇီးရဲ့အပြုသဘောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အတူ၊ရှစ်ကြည့်ရှုခြင်းကအပျက်သဘော၊အမြင့်ဆုံးအဆင်သင့်အမြင်ကိုဘရာဇီးအတွက်အခြားမည်သည့်စစ်တမ်းကောက်ယူကမ္ဘာ့နိုင်ငံ။ ဧပြီလအတွက် ၁၅၀၀၊ဘရာဇီးအခိုင်အမာအားဖြင့်မြန်မာများ၏ဆိုက်ရောက်တွင်ဂီကိုစုထားတော်မူခြင်းအားဖြင့် Á ။ ထိ ၁၅၃၀ ဂီခဲ့ တည်ထောင်သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးကိုလိုနီဘရာဇီးအတွက်။ ပထမရာစု၏အခြေချ၊ဂီကိုသဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ခက်ခဲကိုအသုံးပြုဖို့အငှားအဖြစ်ကျွန်အလုပ်သမား။ သူတို့ ခဲ့၊မြင့်မားတဲ့သေဆုံးထိတွေ့သည့်အခါအနောက်တိုင်းရောဂါများနှင့်ပြေးနိုင်နှင့်အဝှက်အစားအလွယ်တကူ။ ဒီတော့ဂီလှည့်မှတင်သွင်းဖရိကကျေးကျွန်များအတွက်လက်စွဲအလုပ်သမား။ ေ၁၆နှင့်
၁၇ ရာစုနှစ်တရားဝင်အခွန်မှဘရာဇီးခဲ့သေးကြောင်းသုံးရာခိုင်နှုန်းဂီပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအတွက် ၁၅၈၈ နှင့်ငါးရာခိုင်နှုန်းသာ ၁၆၁၉။ အဆိုပါစီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုအာရုံစိုက်အပေါ်သေးငယ်တဲ့လူဦးရေ၏အခြေချအတွက်စေ့စပ်မြင့်မားတဲ့အမြတ်အစွန်းတင္ပို- စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အရှေ့မြောက်ဘက်။ အ ၁၆၉၀၊ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း၊ရွှေနှင့်အ ၁၇၂၀ စိန်နောက်ထပ်တာင္ေ ၊ဖွင့်လှစ်အသစ်အခွင့်အလမ်း။ ရွှေလုပ်ငန်းမှာ၎င်း၏အထွတ်အထိပ်ပတ်ပတ်လည် ၁၇၅၀၊နှင့်အတူထုတ်လုပ်မှုခန့်တဆယ်တန်ချိန်နှစ်၊ဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံးအဖြစ်အကယ်၍မောပန်းနွမ်းနယ်၊အုန်းနှင့်လက္ေ။ ပထမဦးဆုံးဝက်တွင် ၁၈ ရာစု၏အမြတ်ငွေလွှဲမှရွှေပျမ်းမျှ ၅။ နှစ်ဆယ်သုံးသန်းထည့္ပါ (£၁။ လေးသန်း)နှစ်၊အရာ၏အဖေါ်တော်ဝင်ငွေခဲ့ကြပတ်ပတ်လည်ရှစ်ရာခိုင်နှုန်း။ စုစုပေါင်းဇီးရွှေတင်ပို့မှုအလုံးစုံကို ၁၈ ရာစုနှစ်အကြားရှစ်ရာနဲ့တန်ချိန် ၈၅၀။ ၁၈၀၈ ခုနှစ်တွင်၊အဆိုပါပေါ်တူဂီအနန္တရောက်မင်းသားဂျွန်အခက်ပြေးဖို့ရီယိုဒီဂ်ေမှလွတ်မြောက်ရန်ပြင်သစ်ကျူးကျော်ဂီ၏။ သူသည်ဆောင် ၁၀၊၀၀၀ အပြည်တည်ထောင်သူနှင့်အတူအသိမ်၊ယႏၱ၊နှင့်အချို့။ အဘို့အဆယ်နှစ်၊ရီယိုဒီဂ်ေည့္ပု၏မြို့တော်အဖြစ်နိုင်ငံတော်၏ပေါ်တူဂီအတွက်ဘာချို့ပညာရှင်ခၚတဲ့'မြို့ပြပယ်ဖျက်'ငါ။အီး၊ဟောင်းတစ်ဦးနီ လေ့ကျင့်ခန်းအုပ်ချုပ်ကျော်တခု၏ပေါ်တူဂီအင်ပါယာ။ ၁၈၁၅ တွင်၊အစဉ်ကာလအတွင်းအဖြစ်၊ယောဟန်ဩဖန္တီးယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၏ဂီ၊ဘရာဇီးနှင့်အ ၊မြူးဖို့ဘရာဇီးကိုအတူရာထူးအဖြစ်မြန်မာနှင့်တိုးမြှင့်ရေးအတွက်လွတ်လပ်ရေးဇီး၏။ ဘရာဇီးကိုယ်စားလှယ်များညီလာခံမှပေါ်တူဂီစစ္သား။ သာ ၁၈၁၆၊သော၏သေမင်းနှင့်မိဖုရားမာရီယာ၊ယောဟန်ဩခဲ့ဖူဆောင်းဘုရင်၏တူဂီနှင့်ဘရာဇီးရိွရီယိုဒီဂ်ေ။ ယောဟန်ဩခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကြပ်အတည်းအခါအုပ်စုသောသူ။ ဂီအတွက်ကြိုးစားခဲ့သည်ပြောင်းပြန်အ င်းတို့၏ယခင်ကိုလိုနီ။ အဆုံးနှင့်အတူအ စစ်ပွဲများလာေယောဟန်ထံသို့ပြန်လာလစ္စနှင့်အတြက္ဘရာဇီးသို့ပြန်လာ၎င်း၏ယခင်ကိုလိုနီအခြေအနေ။ အားဖြင့်နှောင်းပိုင်း ၁၈၂၁ အခြေအနေဖြစ်လာနိုင်သောနှင့်ယောဟန်ဩနှင့်တော်ဝင်မိသားစုမှပြန်လာသောမြန်မာ။ ဂီတရားရုံးတော့တောင်းဆိုသောမင်းသား ျပန္သြားသည္။ အဖြစ်သူ၏ဖခင်နှင့်အကြံပေးတဲ့ခဲ့လုပ်ဖို့သူ့ကို၊မင်းသားအစားကြေညာသူ၏အခြေအနေ ဘရာဇီးအတွက်အတွက်မိန့်ခွန်းအဖြစ်လူသိများ('ပါ။')။ လက္ခံက်ဘရာဇီးလွတ်လပ်ရေးအပေါ်စက်တင်ဘာလ ၇၊၁၈၂၂ နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်မြန်မာရာဇ်တိုင်းပြည်၏။ ရှိအချို့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးမှပေါ်တူဂီ ဘရာဇီးအတွက်၊ဒါပေမယ့်ရုန်းကန်ဘီ။ ဂီသိအမွတ္ျဘရာဇီးရဲ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် ၁၈၂၅။ ၁၈၉၄ အတွက်ဆက်ဆံရေးတင်းမာခဲ့ကြနှစ်ခုအကြားပြီးနောက်ပြည်ထောင်စုဂီခွင့်ပြုခိုလှုံဖို့ဘရာဇီးပုန်ပြီးနောက်အ ႏွင့္ရွမ်းပျက်။ ဂီလုံးအရေတပ်အင်အားရိုင္တအဆိုပါသင်္ဘော နှင့်ႏမှရီယိုဒီဂ်ေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့တူဂီအကျိုးစီးပွားကာလအတွင်းတပ်ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်သမ္မတ ။ အပေါ်နှစ်လ ၁၈၉၄၊အန္ႀခဲ့ကြေမွနှင့် ၄၉၃ ပုန်အပါအဝင်၊ခုနစ်ဆယ်အရာရှိနှင့်အမျိုးမျိုးခေါင်းဆောင်ဗိုလ် íႏႏွင့္ ၊ဆည်းကပ်ခိုလှုံရာအဘုတ်အဖွဲ့ပေါ်တူဂီသင်္ဘော။ နေသော်လည်းပည္သူေအဘရာဇီးအစိုးရ၊ဂီခွင့်ပြုမိပုန်နှင့်တောင်ပိုင်းအရီယိုလာ ၊ အများစုဟာဒုက္ခသည်တွေလိုပါ။ အဖြစ်အပျက်ကြီးအဖြစ်မှတ်ယူချိုးဖောက်ရာဇီးဋ္ဌနှင့်ဦးဆောင်ဖို့ဘရာဇီးကိုပြင်းထန်မာ့စ္တူဂီ။ တစ္ရြာ၍ပြန်လည်ထူထောင်တွင် ၁၈၉၅ ကႏအုပ်ချုပ်။ ၂၀ ရာစုအတွင်း၊နိုင်ငံအကြားနှစ်နိုင်ငံကြပုံကဘရာဇီးရဲ့အကြီးကြီးရွယ်အစားပိုပြီးအစွမ်းထက်။ ဒီအတွက်ကြောင့်ဘရာဇီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံဂီအတွက်သည် ၁၉၇၀ နှင့် ၁၉၈၀ ခဲ့သိသိသာသာထက်သာဂီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်ဘရာဇီး။.
© 2021 ရှေ့နေများအတွက်ဘရာဇီးနှင့်ပေါ်တူဂီ! အားလုံးရှေ့နေများကိုအွန်လိုင်း။